MYANMARTHWAY BLOG: January 2010
မျှော်လင့်ချက်များနှင့် အသက်ရှင်နေရသူများ - ကိုဉာဏ် (ပန်းလောင်မြေ)
အချိန် - လွန်ခဲ့သော နှစ် ၄၀ ခန့်၊ ညနေခင်းတစ်ခု။
နေရာ - မြိုင်သာယာရွာသူကြီး ဦးဖိုးထူး၏ နေအိမ်။
သူကြီးက တစ်ရွာလုံးရှိ မိသားစုအားလုံး အစည်းအဝေးမပျက်မကွက် တက်ရောက်ရမည်ဟု မောင်းထုထားသဖြင့် ဖျားနာနေသူနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုလူမမာများမှလွဲ၍ ကလေးလူကြီးနှင့် ခွေးပါမကျန် သူကြီးမင်းအိမ်ရှေ့တွင် စုရုံးရောက်ရှိနေကြသည်။ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် စကားများကာ ဆူညံနေရမည့်အစား အားလုံး၏မျက်လုံးများက စိုးရိမ်မှုအပြည့်၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဟန်အပြည့်ဖြင့် နောက်ကျောမလုံသလို ခံစားနေကြရသည်။
အလင်းရောင်နည်းလာပြီဖြစ်သဖြင့် ရွာစည်းရိုးပတ်ပတ်လည်ရှိ ကင်းစင်များတွင် ကင်းစောင့်လူငယ်များထွန်းထားသော မီးတုတ်အလင်းရောင်များကလည်း နေရာစိပ်လှသဖြင့် တစ်ရွာလုံးကို မီးမောင်းထိုးထားသည်နှင့်ပင် တူသေးတော့သည်။ ကင်းစောင့်ရွာသားလူငယ်များ၏ လက်ထဲတွင်လည်း ဓားကိုင်သူကဓား၊ လှံကိုင်သူလှံ၊ မြားကိုင်သူကမြားနှင့် မျက်လုံးများက တစ်ခုခုကို အသည်းအသန် ရှာဖွေနေသည့်ပုံစံနှင့်။ ကင်းစောင့်တာဝန်ခံဖြစ်ပုံရသည့် လူကြီးတစ်ဦးကလည်း ကွမ်းတပြစ်ပြစ်ဖြင့် ဟိုကင်းတဲသို့ရောက်သွားလိုက်၊ ဒီကင်းတဲကိုသွားစစ်လိုက်ဖြင့် သူ့အစား ခြေထောက်တောင် ညောင်းမိသေးတော့သည်။
သူကြီးအိမ်ရှေ့မြင်ကွင်းကို ပြန်ဆက်ရလျှင် ရွာသူရွာသားအားလုံးမှာ သူကြီးအလာကို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့် စောင့်မျှော်နေကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကလေးငယ်တစ်ဦးက ၀ါးကနဲထငိုသည်။ အားလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေချိန် ဖြစ်သဖြင့် အားလုံး၏အကြည့်က ထိုသားအမိထံ ရောက်သွားကြသည်။ ကလေးမိခင်ဖြစ်သူမှာ လန့်လည်းလန့်၊ ရှက်လည်းရှက်သွားပုံရသည်။ သူ့သားကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ချော့မော့နေရှာသည်။ သို့သော် ကလေးက အငိုမတိတ်။ "သူကြီးမင်း ကြွလာပါတော့မယ်ခင်ဗျား"ဟု သူ့တပည့်က အော်လိုက်သည်။ ကလေးမိခင်ခမြာ ပျာယာခတ်သွားသည်။ ဒါနဲ့ ကလေးကို ငေါက်လိုက်သည်။ "ဟဲ့ကောင်လေး… တိတ်စမ်း၊ မတိတ်ရင် ကျားကြီးကိုက်လိမ့်မယ်နော်"။ ကလေးငယ်မှာ မျက်လုံးလေး ပေကလပ်ပေကလပ်နှင့် ချက်ချင်းပင်အငိုတိတ်သွားသည်။ ပြီးနောက် မိခင်ဖြစ်သူကို အတင်းအကြပ်ကို ဖက်ထားလိုက်သည်။
သူကြီးက စားပွဲခုံတွင် နေရာယူပြီးနောက် ချောင်းဟန့်လိုက်သည်။ ထို့နောက်-
"ဒီနေ့ တို့ရွာကလူတွေအားလုံးကို အစည်းအဝေးခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ တို့ရွာကို နှောင့်ယှက်ရန်ပြုနေတဲ့ ဟင်းမျိုးကြီးကိစ္စပါပဲ။ အခုဆိုရင် အဲဒီဟင်းမျိုးကြီးကြောင့် ငါတို့ရွာသားတွေအားလုံး အလုပ်ပျက်၊ အကိုင်ပျက်၊ အစားပျက်၊ အအိပ်ပျက်နဲ့ အတော်လေးကို ထိတ်ထိတ်လန့်လန့် နေကြရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားပေပဲ။ ဟင်းမျိုးကြီးကို သွားရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ မုဆိုးအားလုံးလည်း ဒီနေ့အထိ ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိကြဘူး။ အဲဒီတော့ ဘယ်မုဆိုးကိုမှလည်း ငှားလို့မရတော့ဘူး။ အခုတလော အဲဒီဟင်းမျိုးကြီး အတော်လေးအတင့်ရဲလာတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်က ထင်းခုတ်တဲ့ ဖိုးသာအောင် ဟင်းမျိုးကြီးနဲ့တွေ့ပြီး သေသွားတာလည်း အားလုံးအသိပဲ။ မနေ့ညကလည်း ရွာစွန်က ကိုသံချောင်းတို့အိမ် နွားတင်းကုပ်က နွားကြီးရွှေနီကို ၀င်ဆွဲသွားတယ်။ ရွှေနီလိုကောင်ကြီးကိုတောင် ပါအောင်ချီသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ ဒီဟင်းမျိုးကြီး ဘယ်လောက်ကြီးသလဲဆိုတာ အားလုံးစဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့။ ပေပင်ကုန်းတို့၊ ညောင်ပင်သာတို့လို အခြားရွာတွေမှာလည်း ဟင်မျိုးကြီးတွေ ဒုက္ခပေးလို့ ငါတို့လိုပဲ ဒုက္ခရောက်နေကြပြီ။ အဲဒီရွာတွေမှာလည်း ဟင်းမျိုးကြီးတွေကြောင့် သေတဲ့လူတွေ မနည်းတော့ဘူး။ ငါတို့ရွာကလူတွေလည်း သတိထားကြ၊ ရွာပြင်ကို နေ့လည်ဘက်သွားရင် တစ်ယောက်တည်းဘယ်သူမှ မသွားရဘူး။ အနည်းဆုံး သုံးယောက်ဖွဲ့ပြီးသွားရမယ်။ လက်ထဲမှာလည်း တုတ်တို့၊ ဓားတို့ ကိုင်ပြီးမှသွားကြ။ အဲဒါငါ့အမိန့်ပဲ။ ညနေစောင်းတာနဲ့ ရွာပြင်ကို ဘယ်သူမှမထွက်ရဘူး။ ရွာစည်းရိုးပိတ်ပြီးမှ ရွာပြင်မှာရှိနေတဲ့လူ ငါ့အိမ်အောက်က ထိပ်တုံးကိုသာ ကြည့်ထား။ ကင်းစောင့်တဲ့ ရွာက ကာလသားတွေကိုလည်း အိမ်တွေက အလှည့်ကျ အကြမ်းရည်နဲ့ လက်ဘက်သုပ် ပို့ပေးရမယ်။ ရွာကင်းတဲတွေကနေ အချက်ပေးသံကြားတာနဲ့ မိန်းမတွေ၊ ကလေးတွေနဲ့ လူကြီးသူမတွေကလွဲရင် ရှိသမျှယောက်ျားအားလုံး ဓားကိုယ်စီ၊ တုတ်ကိုယ်စီနဲ့ ကင်းတဲတွေကို လာစုရမယ်။ ကဲ… အားလုံးအိမ်ပြန်ကြတော့။ အိမ်တံခါးတွေကို သေချာလုံအောင်ပိတ်၊ နွားတင်းကုပ်တွေမှာ မီးမပြတ်အောင် ဖိုပေးထား"
သူကြီးက ပြောလိုရာတွေပြောပြီးလို့ ပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ မြိုင်သာယာရွာသူရွာသားအားလုံး ခပ်သုတ်သုတ်နဲ့ အလျှိုလျှို ပြန်သွားကြတယ်။ အားလုံးက ကိုယ့်အိမ်ကို အမြန်ဆုံးပြန်ရောက်ပြီး လုံလုံခြုံခြုံနေကြဖို့ပဲ တွေးနေကြသည်။ အရင်ကဆိုလျှင် မနက်မိုးမလင်းခင် လယ်ထဲဆင်း၊ အလုပ်,လုပ်၊ တစ်နေကုန်တစ်နေခမ်း ပင်ပင်ပန်းပန်းနှင့်ပြန်လာ၊ အိမ်ရောက်တော့ ရေမိုးချိုး၊ မိသားစုတွေ ထမင်းလက်ဆုံစား၊ ကလေးတွေက ရွာလယ်လမ်းမမှာ ဆော့ကစားကြ၊ လူကြီးသူမတွေက ကောက်ပဲသီးနှံအကြောင်း၊ ရာသီဥတုအကြောင်း၊ ရပ်ရေးရွာရေးအကြောင်းကို စကားဝိုင်းဖွဲ့ကြ၊ မိန်းမတွေက လသာလျှင် ဗိုင်းငင်ကြ၊ စကားပြောကြ၊ လ,မသာလျှင် မီးခွက်ကိုယ်စီဖြင့် အ၀တ်ချုပ်ကြ၊ စကားဖလှယ်ကြဖြင့် ပျော်စရာကောင်းခဲ့သော၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိခဲ့သော မြိုင်သာယာရွာကလေးမှာ အခုတော့ ကျားတစ်ကောင်ကြောင့် ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြင့် ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဆိတ်သုဉ်းနေရသည်။ အခြားရွာတွေမှာလည်း အခုလိုပဲ ရှိနေကြမှာ သေချာသည်။
အရင်လို အေးချမ်းတဲ့ဘ၀တွေကို ပြန်ရဖို့အတွက် သူတို့တွေ ဘယ်လောက်ကြာအောင် စောင့်ရဦးမှာလဲ။ သောင်းကျန်းနေတဲ့ကျားကြီးတွေကို အမိဖမ်းနိုင်မှလား၊ အဲဒီကျားကြီးတွေ အသက်ကြီးလို့ အိုမင်းသေဆုံးသွားမှလား။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီကျားကြီးတွေကို နှိမ်နင်းပေးနိုင်မယ့် လူစွမ်းကောင်းတွေ ပေါ်လာတဲ့အထိလား။ မျှော်လင့်ချက်များစွာ၊ အတွေးများစွာနဲ့ သက်ပြင်းမောကြီးတွေ ချနေကြရဆဲပါ။
အချိန် - လွန်ခဲ့သော ၂ လခန့်၊ နံနက်ခင်းတစ်ခု။
နေရာ - မြိုင်ဟေ၀န်တောကြီး၏ တောနက်အတွင်းရှိ လျှိုကြီးတစ်ခုအတွင်း။
မြိုင်ဟေ၀န်တောအတွင်း ရှိသမျှကျားအားလုံး စုဝေးတိုင်ပင်ကြရန် ညှိနှိုင်းထားကြသည့်အတိုင်း စုံစုံညီညီ ရောက်ရှိနေကြသည်။ လမ်းအတိုင်း လာလို့မရသဖြင့် ရှိသမျှ လျှိုမြောင်၊ ချောင်ချိုချောင်းကြားများကိုတိုးရင်း သတိကြီးစွာဖြင့် လာကြရသဖြင့် စုရပ်နေရာလျှိုကြီးကိုရောက်တော့ အားလုံးကမောဟိုက်နေပြီ။ ဒါတင်မက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျီးကန်းတောင်းမှောက် သတိကြီးစွာဖြင့် ကြည့်ကြရသေးသည်။ အားလုံးဆိုလို့ အများကြီးမထင်လိုက်ပါနှင့်။ တောတစ်ခုလုံးက ကျားတွေအားလုံး စုဝေးတာတောင် ၄ ကောင်ပဲရှိသည်။ အားလုံးကလည်း ပိန်ပိန်လှီလှီနှင့် အရိုးပေါ်အရေတင်ဖြစ်နေပြီ။ ဒီတောထဲမှာ တကယ်ရှိတာက ၅ ကောင်၊ သို့သော် တစ်ကောင်က မနေ့ကမှ မုဆိုးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ချက်ဖြင့် လက်ပြင်ကို ကျည်ဆန်မှန်ပြီး ဂူထဲမှာ ကျန်ခဲ့သည်။ လေးကောင်လုံးကလည်း တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင် အပြန်အလှန်ကြည့်ရင်း သာကြောင်း၊ မာကြောင်း မေးကြရသည်။ အချင်းချင်းတွေ့ဖို့ဆိုတာ တစ်နှစ်မှာတစ်ခါ ကြုံရတာမျိုးမဟုတ်။ ကိုယ့်ဂူထဲမှာ ကိုယ့်ဘာသာအောင်းပြီး ပုန်းနေကြရတာ။ ဂူထဲကို မျက်စိလည်ပြီး ၀င်လာတဲ့ အကောင်ငယ်လေးတွေရှိမှပဲ အစာစားကြရသည်။ မဟုတ်လို့ကတော့ ကွေးပြီးသာ အိပ်နေပေရော့။ မနေနိုင်တော့လို့ ဂူအပြင်ထွက်မိပြီဆိုတာနဲ့ တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုရင် သေချာပြီ၊ အဲဒီကောင် ပိုက်ကွန်ဖြင့် အဖမ်းခံချင်ခံရ၊ ဒါမှမဟုတ် သေနတ်ဖြင့် အပစ်ခံရပြီး လှောင်အိမ်တွေထဲကို ထည့်သွားတာခံရပြီ။ လူဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်း အခုမှ ဘယ်လိုတွေဖြစ်တယ်မသိဘူး၊ ဘာအနံ့မှလည်းမရဘူး၊ မြင်လည်းမမြင်ရဘူး၊ ဒီလောက်တောနက် ခေါင်သီတဲ့နေရာကို သူတို့တွေမို့ မပင်မပန်း ဘယ်လိုနေကြလဲမသိဘူး။ ဘာလူနံ့မှမရလို့ ထွက်မယ်တော့ စိတ်မကူးနဲ့ နောက်ရက်ဆိုရင် ကိုယ့်ဂူနားကို သူတို့တွေရောက်လာကြပြီ၊ လုံးဝကိုနေရာမလွဲဘူး။ တတ်လည်းတတ်နိုင်ကြတဲ့လူတွေဗျာ။ အဘိုးပြောပြတုန်းက လူဆိုတဲ့ကောင်တွေက ကျုပ်တို့ကျားတွေကို သိပ်ကြောက်တာတဲ့။ ကျုပ်တို့တစ်ချက်ဟိန်းလိုက်တာနဲ့ အယောင်ယောင်အမှားမှား ဖြစ်ကုန်ကြတာတဲ့။ အခုတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ကျုပ်တို့မှာ မစင်လည်းမစွန့်ရဲ၊ အပေါ့လည်းမသွားရဲ၊ ရေဆိပ်လည်းမဆင်းရဲ၊ နှာတောင်မချေရဲဘူး။ ဟိန်းဖို့ဆိုတာ ဝေးလာဝေးပေါ့။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင် ဟိန်းမှဟိန်းတတ်ရဲ့လားလို့ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်မိတယ်။ ကျုပ်မွေးလာကတည်းက တစ်ခါမှ မဟိန်းဖူးဘူး။ အဖေကလည်း ဟိန်းဟောက်ဖို့ တစ်ခါမှ သင်မပေးဖူးဘူး။ အသက်ရှည်ရှည်နေချင်ရင် အသံလုံးဝမထွက်ဘဲ နေတတ်အောင်ကျင့်တဲ့။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အဖော်မရှိ၊ ဘာမရှိနဲ့ တစ်ကောင်တည်းနေလာရတာ အသားတောင်ကျနေပါပြီ။
အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် အစ်ကိုကြီး ရွှေကျားဝမ်းက အသံတိုးတိုးဖြင့် စကားစပြောသဖြင့် သူ့အတွေးတွေကို ဖြတ်လိုက်ရသည်။
"အခုလို ငါတို့အမျိုးတွေကို လေးကောင်တောင်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာသကွာ။ ငါက အမှတ်အသားတွေသာ လုပ်ခဲ့ရတယ် မင်းတို့တွေ တွေ့မှတွေ့ပါ့မလားလို့ စိတ်ပူနေတာ။ ဟို လူဆိုတဲ့ကောင်တွေက ငါတို့အမှတ်အသားတွေကို နားလည်တယ်ကွ။ သူတို့တွေ မမြင်အောင်လည်း ငါတို့ဘာသာပဲသိတဲ့ လျှို့ဝှက်နေရာတွေမှာပဲ စွန့်စွန့်စားစား လုပ်ခဲ့ရတာ။ အခုလို ငါတို့ကျားအများကြီးကို တစုတဝေးတည်း မမြင်ဘူးတာ နှစ်နဲ့ချီပြီးတောင် ကြာနေပြီ။ အခုလိုငါတို့တွေ တစ်စုတစ်ဝေးတည်း ဆုံတွေ့ရမှုကို သေတဲ့အထိ ငါသတိရအမှတ်ရနေမှာပါကွာ။ ကံကောင်းထောက်မပြီး ကျားမလေးတစ်ကောင်နဲ့များ ဆုံခဲ့လို့ သားသမီးတွေရခဲ့ရင် ဒီတောထဲမှာ ငါတို့အမျိုးတွေ အခြား ၄ ကောင် ရှိသေးတယ်ဆိုတာကို ပြောပြလိုက်ပါ့မယ်။ ဂူထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာရနေတဲ့ကောင်ကိုလည်း ငါက သတင်းမေးတဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ကြပါကွာ။ ငါတို့မှာလည်း ဒီမြိုင်ဟေ၀န်တောကလွဲရင် နေစရာ၊ ပြောင်းစရာမရှိတော့ဘူးကွ။ ငါတို့တောဘေးက တောတွေအကုန်လုံးလည်း ရွာသားတွေ ထင်းခုတ်၊ ၀ါးခုတ်၊ တောမီးရှို့၊ မီးသွေးဖုတ်၊ သစ်ပင်တွေခုတ်ကြနဲ့ ပြောင်တလင်းခါနေပြီ။ ဒီတောကိုတောင် ကန့်သတ်ထားလို့ဆိုလား၊ ဘေးမဲ့ဆိုလားထားကြသတဲ့။ သေချာတော့ နားမလည်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခြားတောတွေလိုတော့ အပင်တွေကို အများကြီးဝင်မခုတ်ကြဘူးကွ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ငါတို့တွေ နေလို့ရနေသေးတာ။ အကောင်ငယ်တွေကလည်း မရှိသလောက်ဖြစ်နေပါပြီကွာ။ ငါတို့ကို မစားရပါဘူး။ လူတွေက ထောင်ချောက်ဆင်လိုက်၊ ပစ်ခတ်လိုက်နဲ့ ကုန်သလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ နောက်နှစ်ကျရင် ဒီနေရာမှာပဲ ငါတို့တွေ ပြန်ဆုံကြမယ်။ မင်းတို့အားလုံး လာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ လာနိုင်ပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကွာ။ ဟိုမိဝါနဲ့ ဂျမ်းတောကလည်း ရှားရှားပါးပါး ကျားစုံတွဲဆိုလို့ နင်တို့ပဲရှိတာ။ ငါတို့အတွက် တူလေး၊ တူမလေးတွေ အများကြီး မွေးကြစမ်းပါဟာ။ နောက်နှစ်လာတဲ့အခါ နင်တို့သားသမီးတွေကို ခေါ်လာနိုင်အောင်ပေါ့။ ကလေးတစ်ယောက်ကို ယုန်တစ်ခြမ်းနှုန်းနဲ့ ငါတို့ဆုပေးပါ့မယ်။ အခုတော့ သတိဝီရိယထားပြီး ကိုယ့်နေရာကိုယ် ပြန်ကြတော့၊ ငါလည်း ပြန်တော့မယ်၊ တော်ကြာနေရင် တအားပြေးတဲ့ဟာကြီးကိုစီးပြီး လူတွေအများကြီး သစ်ပင်လာခိုးခုတ်ကြတော့မယ်။ တွေ့သွားရင် ငါတို့မာလကီးယားနေဦးမယ်"
အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပြီး အစည်းအဝေးတက်လာသော ကျားလေးကောင်လုံး လာရာလမ်းများဆီသို့ သတိအပြည့်ဖြင့် ပြန်လာကြသည်။ ဒီတောကြီးတစ်ခုလုံးမှာ ကျားဆိုလို့ ငါတို့ငါးကောင်ပဲ ရှိတာကွလို့ ဂုဏ်ယူရမလား။ အဖော်မရှိ၊ အထီးကျန်စွာနဲ့ ချို့တဲ့စွာနေရတဲ့ဘ၀ကိုပဲ စိတ်နာရမလားဆိုတာတော့ မတွေးတော့ပါဘူး။ ငါတို့တွေ အေးအေးချမ်းချမ်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေရတဲ့ကာလကို ပြန်ရလာမှာပါလေဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးကို အားတင်းပြီးမွေးရင်း ဘ၀ခရီးကို ဆက်နေရဦးမှာပဲမဟုတ်လား။
ဟော… ပြောရင်းဆိုရင်း လူနံ့ရတယ်။ တွေ့ရာခြုံပုတ်တစ်ခုထဲကို အလျင်အမြန်ဝင်ပုန်းလိုက်ရတယ်။ အို… အမေ့၊ ဘာကြီးလဲ။ ကြည့်လိုက်တော့ တုန်ရင်နေတဲ့ ၀က်ဝံကြီးတစ်ကောင်၊ မျက်နှာက သွေးဆုတ်မတတ် ဖြူဖပ်ဖြူရော်ဖြင့် တအားကို ကြောက်လန့်နေပုံရသည်။ သူလည်းပဲ လူနံ့ရလို့ တွေ့ရာနေရာကို ၀င်ပုန်းနေတာဖြစ်မည်။ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ ဘ၀တူတွေ မဟုတ်ပါလား။
ညီငယ် ၀က်မဆိုတဲ့ အမျိုးကောင်းသားတစ်ယောက် အခန်းမှာ ဂျာနယ်လာဖတ်ရင်း သတင်းတစ်ခုကို ဖတ်နေရင်းနဲ့ အမှတ်တမဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို အတွေးကွန့်ပြီး ခံစားရေးသားထားတာပါ။ အမြဲတမ်း စိတ်ထဲကနေပဲ လိုက်ဆိုတတ်တဲ့ ကျေးဇူးရှင်က ဒီတစ်ခါတော့ ပါးစပ်ကနေ ထုတ်ပြောခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။း)
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့။
ညနေ ၄ နာရီ ၅၂ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 6:24 PM0Comment(s) Link This
Gtalk က အတွေးစာသားများ စုစည်းမှု (၂)
ပထမဦးဆုံးတင်ပေးဖူးတဲ့ ဂျီတော့(ခ)က အတွေးစာသားလေးတွေကို ဒီနေရာမှာ ပြန်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အတွေးလေးတွေရခဲ့ရင် လက်ဆင့်ကမ်းပြီး ပို့ပေးကြဖို့ ခင်မင်တဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကို မှာထားတတ်ပါတယ်။ ဒီနေ့အီးမေးလ်စစ်တော့ ဖော်ဝက်(ဒ)မေးလ်တစ်စောင်က ဂျီတော့(ခ) စတေးတပ် မက်ဆေ့ခ်ျတွေကို စုပေါင်းစပ်ပေါင်းစုစည်းထားတဲ့ဟာ ဖြစ်နေတယ်။ သဘောကျတာလေးတွေကို ရွေးပြီးပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ မူလစုစည်းသူ၊ ပေးပို့ခဲ့သူက ဘယ်သူမှန်း အတိအကျမသိတဲ့အတွက် နာမည်တပ်ပြီး ကျေးဇူးစကား မဆိုနိုင်တာကို နားလည်ပေးပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလို စုစည်းခဲ့တဲ့လူကို မသိပေမယ့် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ခင်ဗျား။ အောက်မှာ ဖတ်ရှုခံစားကြည့်ကြပါဦး။
ကဲ ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလိုက်သလဲ။ တချို့စာသားလေးတွေများဆိုရင် အတွေးလေးတွေက လှလွန်းလို့ ကျွန်တော့်မှာ ဖတ်လို့တောင် မ၀ဘူး။ ခဏခဏကို ပြန်ရွတ်နေမိတာဗျ။ သြော်... ဒီစာသားတွေထဲမှာ ခင်ဗျားရဲ့ ခံစားချက်တွေလည်း ပါနေခဲ့ရင် နားလည်ပေးလိုက်ပါဦးနော်။ အခြားသူတွေကိုလည်း ဝေမျှခံစားတယ်လို့ သဘောထားလိုက်ပေါ့။ သဘောကျစရာ စာသားလေးတွေ တွေ့ခဲ့၊ ဖတ်ခဲ့၊ မြင်ခဲ့ရရင် ကျွန်တော့်ကို လက်တို့လိုက်ပါဦးနော်။ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်နေကြောင်းပါ။
ညနေ ၆ နာရီ ၁၁ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 6:10 PM0Comment(s) Link This
Labels Gtalk - ဂျီတော့ခ်, အထွေထွေ-Various
ဇာတ်ကားအမည် - အကြင်နာလေညင်း
သရုပ်ဆောင်များ - မင်းမော်ကွန်း၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်၊ မယ်လိုဒီ၊ ဇော်ဇော်အောင်၊ ကြူကြူသင်း
ဇာတ်ကားသစ်မရှိတဲ့အတွက် အဟောင်းတွေထဲက မကြည့်ရသေးတာတွေကို ပြန်ရှာပြီးကြည့်ဖြစ်တာပါ။ ကာရန်တွေ၊ နဘေတွေနဲ့ အောင်ဗပါဝါရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့။
ဇာတ်ကားအမည် - ပုံပြင်ရိုင်း
ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်း - လွမ်းဝေအောင်
တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ - သြရသ
ဒါရိုက်တာ - ညီညီထွန်းလွင်
သရုပ်ဆောင်များ - ပြေတီဦး၊ နေဆန်း၊ မေကဗျာ၊ ဟန်နီထွန်း၊ ကိုကိုဦး
ဇာတ်ကားသစ်မရှိတဲ့အတွက် အဟောင်းခွေထဲက ပြန်ရှာကြည့်ဖြစ်တာတစ်ခုပါ။ ဂျပန်ခေတ်ကို ဇာတ်နောက်ခံထားပြီး ပျိုးသွားတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းဟာ နည်းနည်းတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ နိဒါန်းကောင်းပြီး စာကိုယ်လိုသွားတယ်။ နိဂုံးကျတော့ တော်တော်ကို ပေါ့သွားတဲ့ စာစီစာကုံးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်နေရသလိုပဲ။
ဇာတ်ကားအမည် - မှားနေကျနေရာ
ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်း - မောင်ယုယ
ဒါရိုက်တာ - နီဝင်ထွန်း၊ ကျော်ကျော်
သရုပ်ဆောင်များ - မင်းအုပ်စိုး၊ ပွင့်နဒီမောင်၊ ဇော်ဇော်အောင်
ဇာတ်ကားသစ်မရှိတဲ့အတွက် အဟောင်းထဲက ငှားကြည့်ဖြစ်တဲ့ အခွေတစ်ခွေပါ။ ကျွန်တော်နေခဲ့ဖူးတဲ့ ကလောမြို့ရှုခင်းတွေကို တ၀ကြီးကြည့်လိုက်ရတာကလွဲရင် ပေးချင်တဲ့ message ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင် မပေးနိုင်ခဲ့ဖူး။
ဇာတ်ကားအမည် - သမုဒ္ဒရာရပ်ဝန်းဒေသ
ဇာတ်လမ်း၊ ၀တ္ထု - သီရိမျိုး (မြန်မာစာ)
ဇာတ်ညွှန်း - အောင်SS
ဒါရိုက်တာ - မျိုးဇော်အောင်
သရုပ်ဆောင်များ - ရန်အောင်၊ မေသန်းနု၊ ထွဋ်အာကာလင်း၊ ဘုဏ်းမြတ်၊ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်၊ ဇူဇူးမောင်
သရုပ်ဆောင်အသစ်တွေကို ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်း၊ ၀ါရင့်တွေနဲ့တွဲပြီး တင်ပေးချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးက ကောင်းပေမယ့် ဇာတ်လမ်းကမကောင်းဘူးဖြစ်နေတော့ ကြည့်ရင်းနဲ့ အိပ်ငိုက်ခဲ့ရတယ်။ သရုပ်ဆောင်သစ်တွေ မကောင်းပေမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းနေရင် သူ့အလိုလိုဆွဲခေါ်သွားမှာပဲလေ။ အခုတော့ ဇာတ်လမ်းက မဖြစ်နိုင်တာကို တမင်ကို မရမက ရိုက်ပြသွားတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်။
ဇာတ်ကားအမည် - လိပ်ပြာစေတဲ့လမ်း
ဇာတ်ညွှန်း - သီဟစိုး
ဇာတ်လမ်းနှင့် ဒါရိုက်တာ - ၀ိုင်း
သရုပ်ဆောင်များ - ပြေတီဦး၊ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း၊ လင်းလက်ဟိန်း၊ ဇင်မျိုး၊ ကျော်သူအောင်၊ ကေတုမတီမျိုးအောင်၊ ကိုကိုဦး၊ နိုင်လူ၊ ထူးသာ၊ ဘဂျမ်း၊ ဦးဝင်းမြိုင်
ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်း ပေးချင်တဲ့ message ကို အပြည့်အ၀ကို ရခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပေါ့။ ဇာတ်လမ်းပျိုးကတည်းက ခပ်ဆန်းဆန်းလေး ပျိုးထားခဲ့တယ်လေ။ နိဒါန်းပျိုးတာလေးက နည်းနည်းလေးဆန်းတော့ နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုများ မှီငြမ်းထားသလားလို့ တွေးမိသေးတယ်။ ကျွန်တော်က နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းတွေ သိပ်မကြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက် မသိပါဘူး။ ရန်ကုန်ဆိုတာ…. ဆိုတဲ့စကားပြောလေးနဲ့စပြီး ဇာတ်လမ်းကို ဆွဲခေါ်သွားလိုက်တာ ဘာဖြစ်မှာလဲ၊ ဘာဖြစ်မှာလဲနဲ့ တွေးပြီးစောင့်ကြည့်ရတဲ့အထိပါပဲ။ ကေတုမတီမျိုးအောင်နဲ့ ကိုကိုဦးကို ပြန်သုံးထားတဲ့ ဒါရိုက်တာရဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခုတည်းနဲ့တင် အတော်လေးကို အမှတ်ပေးနေမိတယ်။ ဒီနေ့ခေတ် လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်တွေကို ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်၊ ငါတို့မအိုသေးဘူးလို့ ပြောသွားကြသလိုပါပဲ။ ဒီဘက်ဗီလိန်တွေထဲမှာ တူတူတန်တန် ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာ မင်းရဲဆက်တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေက အတင်းကာရော၊ မျက်လုံးတွေပြူးပြ၊ ဖြဲခြောက်ကြနဲ့ မမိုက်ပါဘူးဗျာ။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ကေတုမတီမျိုးအောင်နဲ့ ကိုကိုဦးက လူကြမ်းဇာတ်ကောင်စရိုက်တွေကို အပီပြင်ဆုံး သရုပ်ဆောင်ပြသွားပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကို ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်လမ်းအဖြစ် အမှတ်ပေးလိုက်မိပါတယ်။ အမှတ်ထင်ထင်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ်လေးက ဒီလိုပါ-
"အူမ,မတောင့်ရင် သီလမစောင့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားဟာ အလကားဗျ၊ အဲဒါ ဆင်ခြေပေးနေတာ… တကယ့်တကယ်ကလေ... ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သီလကို စောင့်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ အဲဒါ အကောင်းဆုံး ဘ၀နေနည်းပဲ"
ငှားကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုလို့ လက်တို့လိုက်ပါတယ်နော်။
ဇာတ်ကားအမည် - မာနလှိုင်း
ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်း - ဇော်ဇင်
သရုပ်ဆောင်များ - ဟိန်းဝေယံ၊ မိုးဟေကို၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ ဇင်မျိုး
ဇာတ်ကားအမည် - မှားခွင့်
ဇာတ်လမ်း - သမီးမြတ်ကျော်
ဒါရိုက်တာ - ၀င်းထွန်းထွန်း ၏ အနုပညာပြချက်
သရုပ်ဆောင်များ - ကောင်းခန့်၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ မေသက်ခိုင်၊ ဇော်ဝင်းနိုင်၊ လူမုန်း၊ အောင်ဇော်မင်း၊ စိုင်းအောင်တင့်၊ ညီဂျော်၊ ကျော်စိုး၊ မျိုးမျိုးခိုင်၊ အိမ့်ကြာဖြူ၊ ပိုင်ကိုထက်၊ ၀င်းမြိုင်၊ ခင်လေးဆွေ၊ ရဲမြညွန့်အဖွဲ့၊ ဒေါ်မြင့်အဖွဲ့
၀င်းထွန်းထွန်းဆိုတဲ့ နာမည်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာ ၀တ္ထု-မောင်လှမျိုး(ချင်းချောင်းခြံ) ဆိုပြီး စာတန်းထိုးတာကို တွေ့လိုက်ရသလိုပဲ ရင်ထဲမှာ နင့်သွားတယ်။ ဇာတ်နာတော့မယ်ဆိုတာ သိနေတာကိုး။ ၀င်းထွန်းထွန်းဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ အဲဒီလောက်အထိ ပေါက်သွားပါပြီ။ ဒီဇာတ်ကားကတော့ အစ်မကြီးဇာတ်ပါ။ စိုးမြတ်သူဇာက အဲဒီဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ပုံဖော်သူပေါ့။ ကောင်းခန့်ကတော့ သရုပ်ဆောင်သစ်တွေထဲမှာ အမြန်ဆုံးအသားကျပြီး ရင့်ကျက်လာတဲ့မင်းသားလို့ မြင်မိတယ်။ သူ့ထက်အရင်ပေါ်တဲ့ မင်းသားသစ်တွေက ဒုံရင်းပဲ သွားနေတဲ့အချိန်မှာ ကောင်းခန့်ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေ တက်လာတာက သိသာလှပါတယ်။ အစ်မဖြစ်သူကို နာကြည်းမုန်းတီးနေတဲ့ မောင်ငယ်တစ်ယောက်စရိုက်ကို တတ်နိုင်သလောက် သရုပ်ဆောင်ပြသွားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းရည်ရွယ်ချက်လေး မဆိုးလှပေမယ့် ဇာတ်အိမ်က အခိုင်ကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက် နည်းနည်းပေါ့နေတယ်။ အထူးသဖြင့် မောင်ဖြစ်သူက အစ်မဖြစ်သူကို နားလည်သွားတဲ့အခန်းကို အခြားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ပြသင့်တာပေါ့။ ပြီးတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် စိုးမြတ်သူဇာကို အသေသတ်မယ် (ဇာတ်လမ်းက သတ်မှာကိုပြောတာ) ဆိုတာ သိနေတော့ ပေါ့သွားတာပေါ့။ ကြည့်မယ်ဆို ကြည့်ပျော်မယ့်ဇာတ်ကားတစ်ခုပါ။
နံနက် ၇ နာရီ ၅၀ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 5:42 PM0Comment(s) Link This
စာလုံးငါးလုံးပါပြီး အရေးအကြီးဆုံးသော စကားမှာ "I am proud of you" "ကျွန်တော် ခင်ဗျားအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်" ဟူသော စကားပင်ဖြစ်ပါသည်။
စာလုံးလေးလုံးပါပြီး အရေးအကြီးဆုံးသော စကားမှာ "What is your opinion?" "ခင်ဗျားရဲ့အမြင်က ဘယ်လိုရှိပါသလဲ" ဟူသော စကားပင်ဖြစ်ပါသည်။
စာလုံးသုံးလုံးပါပြီး အရေးအကြီးဆုံးသော စကားမှာ "If you please" "ကျေးဇူးပြု၍ ခင်ဗျားတတ်နိုင်ရင်" ဟူသော စကားပင်ဖြစ်ပါသည်။
စာလုံးနှစ်လုံးပါပြီး အရေးအကြီးဆုံးသော စကားမှာ "Thank you" "ခင်ဗျားကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ဟူသော စကားပင်ဖြစ်ပါသည်။
စာလုံးတစ်လုံးသာပါပြီး အရေးအကြီးဆုံးသော စကားမှာ "We" "ကျွန်ုပ်တို့" ဟူသော စကားပင်ဖြစ်ပါသည်။
စာလုံးတစ်လုံးသာပါပြီး အရေးကြီးမှု အနည်းဆုံးစကားမှာ "I" "ကျွန်ုပ်" ဟူသော စကားပင်ဖြစ်ပါသည်။
(ဒေါက်တာသိန်းလွင် ၏ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွေးစာစုများ စာအုပ်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
Posted by Ko Nyan Posted Time 5:38 PM0Comment(s) Link This
သီချင်းတွေညည်းမိသမျှ - ကိုဉာဏ် (ပန်းလောင်မြေ)
ကျွန်တော်ဉာဏ်ကြီးအတွက် ခဏခဏ တိုးတိုးလေးရွတ်ပြီး အားတင်းရတဲ့ သီချင်းကတော့ ၀ိုင်ဝိုင်းရဲ့ "ဖြေသိမ့်လိုက်" ပါ။
သူငယ်ချင်း××× ရှေ့ဆက်မင်းဘ၀မှာ အမြဲပျော်ရွှင်ပါစေ××× အောင်မြင်ပါစေ××× တစ်ခါတစ်ရံမှာ ခါးသီးလည်း ကျော်ဖြတ်လိုက်ပေါ့ဟေ့××× ဟိုအရင်ချိန်က ကြေကွဲခြင်း××× မင်းမျက်ရည် မြစ်ပြင်ကျယ်မှာမြော ပင်လယ်ထိစီးပါစေ အားတင်းကာလျှောက်လေ×××
(အားတင်းရတာတွေများလွန်းတဲ့အတွက် တင်းလွန်းတဲ့ကြိုး ပြတ်တတ်တယ်လို့ ဆိုထားတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်တွေလည်း ဘယ်တော့များ ပြတ်သွားမလဲလို့ တွေးနေမိတယ်။)
ကျောင်းသားဘ၀ကနေ အခုအလုပ်ခွင်ထဲ ရောက်တဲ့အထိ မကြာခဏကြုံရတတ်တာက မသိမသာတစ်မျိုး၊ သိသိသာသာတစ်မျိုး ခြေထိုးခံတတ်တဲ့၊ ကွယ်ရာမှာ မကောင်းပြောတတ်တဲ့ လူစားတွေပါ။ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း ခြေထိုးခံထားမှန်း သိသိကြီးနဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး လျှောက်ရတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ခြေထိုးခံရတာက နောက်ကနေ ဓားနဲ့ထိုးတာထက်တော့ အများကြီးသက်သာတယ်လို့ တွေးမိလို့ပါ။ ဘာပဲပြောပြော ခြေထိုးခံထားတာကို သိနေတဲ့အတွက် ခွေးကျဝက်ကျတော့ မကျခဲ့ပါဘူး။ ဟန်ချက်ပျက်ရုံ၊ လက်ထောက်လိုက်ရတဲ့အထိ ယိုင်လဲကျရုံပါပဲ။ ကွယ်ရာမှာ မကောင်းပြောတာကိုတော့ စိတ်ထဲမှာကို မထားတော့ပါဘူး။ ဟာသအဆိုအမိန့်တစ်ခု ရှိတယ်လေ။ "ကျွန်တော့်ကွယ်ရာမှာ ကျွန်တော့်ကို မကောင်းပြောရုံတင်မဟုတ်ဘူး၊ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ရင်တောင် ကျွန်တော်စိတ်မ၀င်စားပါဘူး"တဲ့။ ဟုတ်ပါရဲ့နော်... ကျွန်တော့်ကိုလည်း ကွယ်ရာမှာ သတ်တဲ့လူတွေ ဘယ်လောက်များနေပြီလဲ မသိပါဘူး။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ အဲဗားဂေါ်လီစီးရီး ထွက်လာတော့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းက အခြားလူတွေနဲ့မတူဘူး ဖြစ်နေပြန်ပါရောလား။ "အတုနဲ့အစစ်" ဆိုတဲ့သီချင်းကို တစ်ခါတစ်လေ Repeat ပေးပြီး တစ်နေကုန်ဖွင့်ထားတတ်လို့ မသိတဲ့လူတွေက တစ်မျိုးများထင်ကြမလားဘဲ။
အတုခိုးချင်ခိုးပါ××× ခိုးပြီးမှအပြစ်တော့မပြောနဲ့××× အပြစ်ပြောချင်ပြောပါ××× ပြောပြီးမှ အတုတော့မခိုးနဲ့×××
(အင်း... ကွယ်ရာမှာအတင်းပြောနေတဲ့လူတွေကို ပြောလိုက်ချင်တာက စိုင်းစိုင်းရဲ့ အတုနဲ့အစစ်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို နားထောင်ဖူးတယ်ရှိအောင် နားထောင်ကြည့်ကြပါလားလို့)
တစ်ရက်တစ်ရက် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တိုင်း အများဆုံးပြောဖြစ်တဲ့၊ အများဆုံးကြားရတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ပြဿနာတွေ၊ အမှုအခင်းတွေများပါတယ်။ ဖြစ်တဲ့လူတွေ၊ ပြောတဲ့လူတွေကတော့ သူတို့အနေနဲ့ အသားလွတ်ကြီး မဆီမဆိုင် အဲဒီပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သက်နေရသယောင် ပြောနေတာကို ကြားရတဲ့အခါများဆိုရင် အင်မတန်ကို နားကြားပြင်းကတ်တာပေါ့။ နဂိုကတည်းက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာ ဘာအရှုပ်အထွေးမှ လုပ်မထားခဲ့ရင် မဆိုင်တဲ့ပြဿနာက ကိုယ့်ကိုလာပတ်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ တစ်ခုခုပတ်သက်ခဲ့လို့သာ ကိုယ့်ဆီကို ရောက်လာတာပါ။ အဲဒီလိုတွေမြင်ရ၊ ကြားရတိုင်း ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ချက်ချင်းသတိရမိတယ်။
××× ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး မလုပ်နဲ့တော့××× ရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့××× လူ့ဘ၀ကို ရိုးသားစွာ ခရီးဆက်×××
(ဟုတ်ကဲ့... ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ လူ့ဘ၀ကို ရိုးသားစွာ ဖြတ်သန်းနေကြပါသလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မညာတမ်း မေးကြည့်ရအောင်လားဗျာ)
ဒီနေ့တော့ ဒီမျှနဲ့တော်ဦးမည်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အမှတ်ထင်ထင်ရှိနေသော သီချင်းများ ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။ အလျဉ်းသင့်သလို ရေးသားပါဦးမည်။ ပြီးအောင်ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ ရက်၊ စနေနေ့။
ည ၈ နာရီ ၄၃ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
အများအကျိုးနဲ့ တရားသူခိုး - ကိုအလင်္ကာ
"ဘုရား" "ဘုရား" "ဘုရား"
ဟုတ်ကဲ့။ ကိုအလင်္ကာ ရင်ဘတ်ဖိပြီး ဘုရားတမိနေပါတယ်ခင်ဗျ။ လက်အုပ်ကလေးချီပြီးလည်း ဘုရားတမိပါတယ်ခင်ဗျ။ လက်အုပ်ချီပြီး ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးကို လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းမှာ ခြေစုံရပ်ပြီး ဦးညွတ်ကန်တော့နေမိပါတယ်ခင်ဗျ။ ကိုအလင်္ကာတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးပါ။ ရှေးရိုးစဉ်လာကတည်းက စေတီပုထိုးဆင်းတုတော်များကိုမြင်ရင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အမှတ်နဲ့ လက်အုပ်ချီဖို့၊ တရားစာအုပ်တွေမြင်ရင် လက်အုပ်ချီဂါရ၀ပြုဖို့၊ သံဃာတော်တွေနဲ့ လမ်းမှာကြုံတွေ့ရင် လက်အုပ်ချီကန်တော့ဖို့ လူကြီးမိဘဆရာသမားတွေက သွန်သင်ထားတာမို့ အကျင့်ကပါနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် စေတီကိုမြင်ရင် လက်အုပ်ချီရပါတယ်။ တရားစာမြင်ရင် လက်အုပ်ချီရပါတယ်။ သံဃာတော်များနဲ့ဆုံတွေ့ရင် လက်အုပ်ချီရပါတယ်။ ဒါက ကိုအလင်္ကာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာပါ။
ကိုအလင်္ကာရဲ့နေအိမ်က ရန်ကုန်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ လမ်း (၄၀) မှာ ခင်ဗျ။ ကိုအလင်္ကာရုံးခန်းက ပန်းဆိုးတန်းမှာပါခင်ဗျ။ ဒါကြောင့် မနက်တိုင်း (၉)နာရီထိုးရင် အိမ်ကနေ ရုံးကို ကုန်သည်လမ်းအတိုင်း အရှေ့ကအနောက်ကို လမ်းလျှောက်သွားလေ့ ရှိပါတယ်။ ကုန်သည်လမ်း ၀ဲယာတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့ လူသွားလမ်း ပလက်ဖောင်းလမ်းပေါ်မှာ ဈေးဗန်းခင်းပြီး ရောင်းနေကြတဲ့ ဈေးသည်များနဲ့ အလွန် စည်းကားလှတယ်ခင်ဗျ။
ကုန်သည်လမ်း ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်သွားတိုင်း ကိုအလင်္ကာ လက်အုပ်ချီ၊ ဘုရားတပြီး လျှောက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့။ ပလက်ဖောင်းဈေးသည်တွေ ပျော်ပျော်ပါးပါးရောင်းချနေတဲ့ ဗီဒီယို၊ ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီဆိုတဲ့ ပွားခွေ၊ ခိုးကူးခွေဆိုင်တွေမှာ သူ့ထက်ငါအပြိုင်အဆိုင် သာသနာပြုနေကြတာမြင်ရလို့ လက်အုပ်ကလေးချီပြီး ဂါရ၀ပြုလျှောက်လှမ်းရတာပါခင်ဗျ။ ညပလက်ဖောင်း ဈေးသည်တွေက သာသနာပြုပုံများတယ်။ သာဓုခေါ်ထိုက်တာကိုး။ သာဓု.... သာဓု.... သာဓုပါခင်ဗျာ။ ပလက်ဖောင်းကဆိုင်တွေမှာ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်က ထင်ရှားကျော်ကြားလှတဲ့ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်ကြီးများရဲ့ ဓာတ်ပုံပိုစတာတွေ၊ ဗီနိုင်းတွေကို အစီအရီအပြိုင်အဆိုင် ချိတ်ဆွဲထားတာဖူးရတော့ လက်အုပ်ချီရပါသဗျ။ ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဖူးမြင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမှတ်လို့။ အခုတော့ လမ်းဘေးမှာ ခြေစုံရပ်ပြီး ဖူးခွင့်ရသဗျ။ ဒါဟာ ပလက်ဖောင်းဈေးသည်များရဲ့ ကျေးဇူးပါခင်ဗျ။ နောက်ပြီး လမ်းဘေးမှာခင်ထားတဲ့ ဗန်းပေါ်မှာလည်း တရားခွေတွေက အစုံခင်ဗျ။ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်မှာ ဟောခဲ့တဲ့ ဓမ္မကထိက အကျော်အမော်တွေရဲ့ တရားစုံကို တစ်ချပ်ကို (၅၀၀၊ ၁၀၀၀) ကျပ်နဲ့ လွယ်လင့်တကူ ၀ယ်နိုင်တာခင်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့ ဘုရားဟောပိဋကတ်တော်အစုံကို ကျပ်တစ်ထောင်နဲ့ ပူဇော်ခွင့်ရတော့ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် အနော်ရထာလမ်းမကြီးကိုပဲ သနားရမလိုလို၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ အထင်ကြီးရမလိုလို။
ဟုတ်ကဲ့... ကိုအလင်္ကာတို့ အခုအချိန်မှာ လူဖြစ်ရတာ နည်းတဲ့ကုသိုလ်မှ မဟုတ်တာ။ ကိုအလင်္ကာတို့ကတော့ လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းမှာ ငွေတစ်ထောင်ပေးရုံနဲ့ ကြိုက်တာရွေးပြီး ပူဇော်နိုင်တာခင်ဗျ။ ဒါဟာ ပွားခွေရောင်းတဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေရဲ့ အများအကျိုးဆောင်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ မဆိုနိုင်ဘူးလားခင်ဗျ။ မလိုသူတချို့ကတော့ ခိုးကူးခွေတွေ သောင်းကြမ်းတာ၊ ဘုရားတရားတောင် မချန်တော့ဘူး။ တရားတွေပါ ခိုးကူးကုန်ကြပြီလို့ ဆိုချင်ပြောချင်ကြတယ်ခင်ဗျ။
ကိုအလင်္ကာစဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။ သူများပစ္စည်းခိုးတာ မခိုးကောင်းဘူး။ အဒိန္ဒဒါနကံ ထိုက်တယ်။ ငါးပါးသီလနဲ့ မညီဘူး။ တရားတွေကို အခွေနဲ့ခိုးရင် တရားသူခိုး။ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ ခိုးကူးခွေရောင်းတဲ့ ဈေးသည်တွေဟာ ဆရာတော် သံဃာတော် တရားတော်တွေရဲ့ တရားတွေနဲ့ လမ်းဘေးမှာ သာသနာပြုနေကြတဲ့ သူတော်ကောင်းဈေးသည်တွေလို့ မဆိုနိုင်ဘူးလားခင်ဗျ။ စဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျ။ သူတော်ကောင်း လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းဈေးသည်တွေမို့ သူတို့ကို ဘယ်သူကမှ မဟန့်တား၊ မပိတ်ပင်၊ မတားဆီးနိုင်ဘဲ လွတ်လပ်ပျော်ပါးစွာ ရောင်းဝယ်ခွင့်ရနေတာပဲ မဟုတ်လားခင်ဗျ။ အားကျမယ်ဆို အားကျထိုက်တဲ့ ခိုးကူးခွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးပါခင်ဗျ။ ကိုအလင်္ကာကတော့ ခေါင်းရှုပ်ခံပြီး မစဉ်းစားတော့ပါဘူး။ ကုသိုလ်ထူးတွေရအောင် လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းခိုးကူးခွေတွေနဲ့ ဆရာတော်သံဃာတော်များရဲ့ ဓာတ်ပုံကို အာရုံပြုရှိခိုးရင်း ဘုရား တ တနေကာ နေ့စဉ်ကုသိုလ် ယူနေမိကြောင်းပါခင်ဗျာ။
(လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ် အတွဲ ၂ အမှတ် ၇၀ မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
Posted by Ko Nyan Posted Time 8:13 PM0Comment(s) Link This
ကျွန်တော်သာ ………… ဖြစ်ခဲ့ရင် - ကိုဉာဏ် (ပန်းလောင်မြေ)
မျက်နှာပေါ်မှာ အရောင်မျိုးစုံတင်၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆင်မျိုးစုံဆင်ပြီး လှလှပပပြင်ဆင်ထားတတ်တဲ့ စူပါမားကတ်တွေ၊ စတိုးဆိုင်တွေက အရောင်းဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတွေကို FM Radioတွေမှာ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူလုပ်နေကြတဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ စကားပြောသံနဲ့ စလောင်းကြော်ငြာတွေမှာပါတဲ့ လေယာဉ်မယ်လေးတွေရဲ့ အပြုံးကို တပ်ပေးလိုက်ချင်တယ်။
လမ်းလျှောက်နေရင်း၊ စက်ဘီးစီးနေရင်း၊ ဆိုင်ကယ်စီးနေရင်း၊ ကားစီးနေရင်း၊ ရထားစီးနေရင်း စည်းမရှိကမ်းမရှိ ကွမ်းတံတွေးကို ပက်ခနဲထွေးတတ်တဲ့လူတွေကို သူတို့ထွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ ဗီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို နောက်ပြန်ရစ်ပြီး သူတို့ထွေးလိုက်တဲ့ ကွမ်းတံတွေးတွေ သူတို့ပါးစပ်ထဲကို ပြန်ရောက်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ ရီမုကွန်ထရိုး (အဝေးထိန်းခလုတ်) တစ်ခု တီထွင်ထားချင်တယ်။
မကောင်းတာတစ်ခုကြံစည်တိုင်း ဆံပင်တစ်ချောင်းကျွတ်ပြီး၊ ကောင်းတာတစ်ခုစဉ်းစားတိုင်း ဆံပင်တစ်ချောင်းပေါက်စေတဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီတစ်မျိုး တီထွင်ချင်တယ်။ (ထိပ်ပြောင်နေတဲ့လူတွေအတွက်တော့ ဆောရီးပါနော်၊ ကျွန်တော့်ခေါင်းလိမ်းဆီက မထွင်ရသေးပါဘူးဗျ။ အခုခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတာနဲ့ မဆိုင်သေးပါဘူးနော်။ တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်။ အဲဒီခေါင်းလိမ်းဆီထွင်ပြီးရင် လူအတော်များများက ဆံပင်ဖိုသီဖတ်သီနဲ့ပဲ နေကြတော့မယ်ထင်တယ်နော်။ ခေါင်းဘီးထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေ ဒေ၀ါလီခံကြရမယ်ထင်ပါရဲ့။)
လူတွေရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်အတန်းကို အဲဒီလူစိုက်ထားတဲ့ သစ်ပင်ပန်းမာလ်ဘယ်နှပင်ရှိသလဲ ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ တိုင်းတာတဲ့လောကကြီးတစ်ခုကို ဖန်ဆင်းချင်တယ်။
တစ်နေ့တာလုပ်ခဲ့သမျှ ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှုတွေကို သင်္ချာနည်းချပြီး ကောင်းမှုများရင် မနက်ဖြန်ဆိုတဲ့ ခရီးကိုဆက်သွား၊ မကောင်းမှုများနေရင် နောက်တစ်နေ့မကူးနိုင်တဲ့ ပြက္ခဒိန်တစ်ခု တီထွင်ထားချင်တယ်။
တစ်ခါပြုံးတိုင်း ပိုက်ဆံတစ်ဒေါ်လာ အိတ်ထဲကို ရောက်လာတတ်တဲ့ ကုတ်အင်္ကျီတွေ တီထွင်ချင်တယ်။
ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကိုတစ်ခါလာဖတ်တိုင်း ကော်ဖီတစ်ခွက် ခင်ဗျားရှေ့ရောက်အောင် ပို့ပေးတတ်တဲ့ ကွန်ပျူတာတွေ တီထွင်ထားချင်တယ်။း)
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၉ ရက်၊ သောကြာနေ့။
နေ့လည် ၂ နာရီ ၀၄ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 2:41 PM2Comment(s) Link This
ခေါင်းဆောင်မှုပညာဟာ ဟုတ်ကဲ့လို့ ပြောတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ ဟင့်အင်း ပြောတတ်ဖို့လိုတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ပြောတာက အင်မတန်လွယ်တာပဲ။
ခေါင်းဆောင်မှုပညာကို သင်ယူလို့မရနိုင်ဘူး။ ဆည်းပူးယူမှ ရမှာဖြစ်တယ်။
အောင်မြင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ သော့ချက်ဟာ သြဇာဖြစ်တယ်။ အာဏာမဟုတ်ဘူး။
ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကို ရွေးလိုက်ရုံထက် ပိုပြီးခက်ခဲတဲ့အလုပ် ဖြစ်တယ်။ ခေါင်းဆောင်မှုပေးတယ်ဆိုတာ ဘက်တွေကို အတူတကွ ပေါင်းစည်းမိအောင် လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။
ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ သင်လုပ်စေချင်တဲ့အရာကို သူလုပ်ချင်လို့ သူ့ဘာသာလုပ်ခဲ့တဲ့ အခြားသူတစ်ယောက်ကို သင့်အနားမှာ ရအောင်ခေါ်ထားနိုင်တဲ့ပညာ ဖြစ်တယ်။
ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ ကြွက်သားတွေကို ဆိုလိုတာလို့ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ခဲ့ဖူးတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ လူတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေရှိခြင်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်နေပြီ။
နိုင်ငံရေးသမားတွေက သူတို့မျက်နှာနီတယ်၊ ဖြူတယ်၊ ပြာတယ်လို့ သူတို့ဘာသာ ပြောနေကြတာပဲ။
သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စရိတ်အတွက် လူတစ်ယောက်က ဒေါ်လာနှစ်သန်းကျော် ထည့်ဝင်တယ်ဆိုရင် အမေရိကန်အစိုးရဆိုတာ တကယ်ကတော့ ရောင်းရန်ရှိသည်လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။
(7Day News ဂျာနယ် အတွဲ ၈ အမှတ် ၄၅ မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
၁၁။ သီပေါမင်း (၁၂၄၀-၁၂၄၇)
မင်းတုန်းမင်း နတ်ရွာစံလျှင် သီပေါမင်းသည် ထီးနန်းဆက်ခံလေသည်။ သီပေါမင်း နန်းတက်ချိန်၌ သီပေါမင်းနှင့် ကင်းဝန်မင်းကြီးတို့ မသိရဘဲ ဖမ်းဆီးထားသော မင်းညီမင်းသားများကို သတ်ဖြတ်ကွပ်မျက်လေသည်။ တိုင်းပြည်အတွက် လက်ရုံးဖြစ်သော မင်းသားများမှာ နန်းတွင်းရေးကိစ္စတွင် ဆုံးရှုံးကြရသဖြင့် အားအင်ယုတ်လျော့ခဲ့ရလေသည်။
သီပေါမင်းလက်ထက်တွင် အောက်မြန်မာနိုင်ငံ၌ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှာ စနစ်ကောင်းမွန် တိုးတက်လျက်ရှိပြီ ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာ့ရှေးရိုးစဉ်လာ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုလည်း ခေတ်မီအောင် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်လာပြီဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံတော်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးဌာန ၁၄ ရပ်ခွဲခြား၍ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်သစ်ကို တီထွင်ပြဋ္ဌာန်းလေသည်။ ဌာနတစ်ခုစီတွင် မင်းကြီးတစ်ခုစီအား တာဝန်ယူစေ၍ ထိုမင်းကြီးတို့သည် တောင်ဥယျာဉ်တွင် စည်းဝေးတိုင်ပင်ကာ နိုင်ငံအကျိုးကို ဆောင်ရွက်ကြရလေသည်။
သီပေါမင်းလက်ထက် ၁၂၄၂ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်တို့နှင့် မဟာမိတ် ခိုင်မြဲစေရန် အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံသို့ သံအဖွဲ့စေလွှတ်ရာ နယ်ခြားတွင် အပေးအယူ ပြန်လည်ဆွေးနွေးရုံမျှဖြင့် ဆက်လက်သွားခွင့်မရဘဲ ရှိလေသည်။ ၁၂၄၃ ခုနှစ်တွင်လည်း အင်္ဂလန်သို့မရောက်ဘဲ အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ်ထံမှသာ ပြန်လာခဲ့ရလေသည်။ ၁၂၄၅ ခုနှစ်တွင် မြို့သစ်၊ မြို့စား မင်းကြီး မဟာဇေယျသင်္ကြံကို အမှူးထား၍ ပြင်သစ်ပြည်၊ အီတလီပြည်များသို့ သံစေလွှတ်၍ ပြင်သစ်နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုလေသည်။
အင်္ဂလိပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ရန် ကြံရွယ်ရင်းရှိသည့်အတိုင်း အကွက်ကို ရှာကြံလျက်သာ ရှိလေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြင်သစ်စသော အင်္ဂလိပ်နှင့် ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံများနှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့သည်ကို မလိုလားချေ။ မြန်မာနိုင်ငံမှ အခွင့်အရေးရရန် ရှိသမျှကို နယ်ချဲ့သူ အချင်းချင်းတွင် အခြားသူက လက်ဦးမည်ကို စိုးရွံ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထဲရေးတွင် အမျိုးမျိုး သူလျှိုထားရှိ၍ တတ်နိုင်သမျှ စွက်ဖက်ခြေရှုပ်လျက် ရှိလေသည်။ ပြည်တွင်းရေး ရှုပ်ထွေးမညီညွတ်မှုကို အခွင့်ကောင်းယူရန် ကြံစည်၍ မှူးမတ်တို့ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားအောင်လည်း မြှောက်ပင့်ဆွဲဆောင်ခြင်း ပြုလေသည်။ တစ်နည်းနည်းနှင့် အင်္ဂလိပ်တို့ ရန်စစ်ပြုမည်ကား သေချာနေပေသည်။
မှူးမတ်တို့ အတွင်း၌လည်း ဂိုဏ်းအသီးသီးကွဲလျက် ရှိလေသည်။ အင်္ဂလိပ်နှင့် စစ်မဖြစ်လိုဘဲ နိုင်ငံတော်ကို ခေတ်မီအောင် ပြုပြင်လိုသော ကင်းဝန်အုပ်စု၊ အင်္ဂလိပ်ကို ခုခံလိုသော တိုင်တားအုပ်စုဟူ၍ ကွဲပြားနေလေသည်။ သို့ရာတွင် ကင်းဝန်မင်းကြီးမှာ သီပေါမင်း၏ အထင်လွဲခြင်းခံရသဖြင့် အခွင့်သြဇာ ကင်းမဲ့နေလေသည်။ ထိုအချိန်၌ အင်္ဂလိပ်တို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြင်သစ်ထက် လက်ဦးအောင်သိမ်းယူမှ ဖြစ်တော့မည်ဟု တစ်ပြည်လုံးကို သိမ်းပိုက်ရန် အခွင့်ရှာလျက်ရှိလေရာ ၁၂၄၇ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ် ဘုံဘေဘားမား သစ်ကုမ္ပဏီက သစ်လုံး ၈ သောင်း ထုတ်ယူလျက် သုံးသောင်းသာ စာရင်းလိမ်ပြသဖြင့် မြန်မာလွှတ်တော်က အပြစ်ကျူးလွန်သော ကုမ္ပဏီကို ဒဏ်တပ်ရိုက်ရာ အမှုအခင်း ကြန့်ကြာအောင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ၀င်ရောက်စွက်ဖက်လေတော့သည်။ မြန်မာအစိုးရက ကုမ္ပဏီပိုင် သစ်တောဘဏ္ဍာနှင့် ဆင်များကိုသိမ်းရာ အင်္ဂလိပ်အစိုးရက အမှုအတွက်သာမက နေပြည်တော်တွင် အင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်အတွက် အုတ်ဝင်းကာ၍ အစောင့်အရှောက် စစ်သားတစ်ထောင်နှင့် တိုက်သင်္ဘော ချထားခွင့်ရရန်ပါ တောင်းဆိုလာလေတော့သည်။ ထိုမျှမက အင်္ဂလိပ်အစိုးရ သဘောမတူဘဲ မည်သည့်နိုင်ငံနှင့်မျှ မဆက်ဆံရန်ကိုပါ တောင်းဆိုလေသည်။ ဤတောင်းဆိုချက်များအရ အင်္ဂလိပ်သည် မြန်မာတို့ မခံမရပ်နိုင်ဘဲ စစ်ဖြစ်ရလေအောင် တမင်အကြောင်းရှာ ရန်စသည်မှာ ထင်ရှားလေသည်။
မြန်မာတို့က စစ်မဖြစ်လိုသဖြင့် ဒဏ်ငွေကို မတပ်ရိုက်တော့ကြောင်း လျှော့ပေးသော်လည်း အင်္ဂလိပ်တို့က မိမိတို့ တစ်ဖက်စီးနင်း လိုလားသမျှ အပြည့်အ၀ လိုက်လျောရမည်ဟု သဘောထားကာ စစ်ချီတက်လေတော့သည်။ စင်စစ်သော်ကား မြန်မာတို့က မည်မျှလိုက်လျောစေကာမူ မလိုက်လျောနိုင်အောင် ထပ်ဆင့်တောင်းဆိုကာ စစ်တိုက်ဖြစ်အောင် တိုက်မည်မှာကား သေချာပေသည်။
အင်္ဂလိပ်တို့က စစ်ချီတက်လာသော်လည်း မြန်မာတို့က ကြိုတင်မျှော်လင့်ခြင်း မရှိသဖြင့် အပြင်းအထန် ခုခံတိုက်ဖျက်ခြင်းမပြုဘဲ နေကြပေသည်။ ထိုမျှမက အင်္ဂလိပ်တပ်များ အင်းဝတောင်ဘက် ရွာသစ်ကြီးအရောက်တွင် မြန်မာတို့က တောင်းဆိုချက်အားလုံး ခွင့်ပြုကြောင်းကို လျှော့ပေါ့စွာ စာရေးပေးပို့သေးသည်။ သို့ရာတွင် အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်က အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ် အမိန့်အရ မန္တလေးအရောက် ချီတက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့လိုလားချက်ကို လိုက်လျောက မဟာမိတ်စာချုပ် ထပ်မံချုပ်ဆိုနိုင်ကြောင်းဖြင့် မလိမ့်တပတ် ပြန်ကြားလေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောကို ပစ်ခတ်ခုခံခြင်းမပြုရန် ကင်းဝန်မင်းကြီးက မြန်မာတပ်များအား ဆင့်ဆိုလေသည်။ ထိုမှတစ်ပါး အင်္ဂလိပ်တို့သည် သီပေါမင်းကို အလိုမကျတော့သည့် ကင်းဝန်အုပ်စု၏ အလိုကျ အင်္ဂလိပ်တို့လက်အောက်သို့ ထွက်ပြေးသော မင်းသားကို ပြန်၍နန်းတင်ပေးရန် ချီတက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု သတင်းလွှင့်ကာ စစ်သင်္ဘောဦးတွင် မြန်မာတစ်ယောက်ကို မင်းညီမင်းသားဟန် ၀တ်စားဆင်ယင်၍ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့လေသည်။ ဤသို့အားဖြင့် ပရိယာယ်ဆင်လေသောကြောင့် အင်္ဂလိပ်တပ်များကို ခုခံခြင်းမပြုမိသည်မှာလည်း အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်လေသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောသည် မန္တလေးနေပြည်တော်သို့ ချောမောစွာ ရောက်ရှိလာခဲ့လေသည်။ ၁၂၄၇ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် ၈ ရက်နေ့တွင်ကား သီပေါဘုရင်၊ သမီးတော်များနှင့် မှူးမတ်အချို့ကို ခေါ်ဆောင်လေတော့သည်။ ပထမတွင် သီပေါမင်းကို တိုင်ပင်လျှင် စာချုပ်ရန်အတွက် ဥယျာဉ်တော်သို့ ပင့်ဆောင်သည်ဟု ထင်မှတ်လေသည်။ ထို့နောက် သင်္ဘောဆိပ် သင်္ဘောပေါ်သို့ ရောက်ရပြန်လေသည်။ ထို့နောက်တွင် အင်္ဂလိပ်ပိုင် ရန်ကုန်မြို့အထိ တင်ဆောင်ဆွေးနွေးလိမ့်မည်ဟု အထင်ရှိခဲ့ရာမှ နောက်ဆုံး မဒရပ်နှင့် ရတနာဂီရိသို့ ခေါ်ဆောင်သွား၍ အကျယ်ချုပ် ချုပ်ထားလေတော့သည်။ ၁၂၄၇ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆုတ် ၁၁ ရက်၊ ၁၈၈၆ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတော်အဖြစ် ကြေညာလိုက်လေသည်။
အယူအဆကွဲကာ အမျိုးမျိုး သွေးကွဲခဲ့ကြသော နန်းတွင်းဂိုဏ်းတို့လည်း အားလုံး သူ့ကျွန်ဖြစ်ရခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ရလေသည်။ အင်္ဂလိပ်တို့၏ ရန်စစ်လည်း တစ်ပြည်ထောင်လုံး သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးမှပင် အလုံးစုံ ကျေနပ်မှု ရရှိသွားခဲ့လေသည်။ စည်းလုံးမှုပျက်ကာ ရန်သူ၏ ပရိယာယ်ကို တိုးဝင်ခဲ့မိခြင်းကြောင့် မင်းနှင့်တိုင်းပြည်ပါ သူ့ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ကြရလေသည်။
သို့ရာတွင် မြန်မာနှင့် အင်္ဂလိပ်တိုက်ပွဲမှာ ဤတွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရင်နှင့် မိဖုရား အဖမ်းအဆီးခံရ၍ ထယ်ထယ်ဝင့်ဝင့် ပြန်လည်စစ်ကြေညာနိုင်ခြင်း မရှိသော်လည်း မျိုးချစ်မြန်မာ့တပ်သားများ၊ မျိုးချစ်မြန်မာများနှင့် မျိုးချစ်တိုင်းရင်းသားတို့မှာ အလွယ်နှင့် အလျှော့ပေး လက်နက်ချကြသည် မဟုတ်ပေ။ သူ့ကျွန်ဖြစ်ရသည်ထက် သေသော်မှတည့် သြော်… ကောင်း၏ ဟူသော စကားအတိုင်း မိမိ အစုအစည်းနှင့် ၀င်လာသော အင်္ဂလိပ်တို့ကို ခုခံတိုက်ဖျက်လျက်သာရှိပေရာ အင်္ဂလိပ်တို့သည် ကြေညာရုံသာကြေညာ၍ နိုင်ငံကိုကား လက်တွေ့အားဖြင့် မသိမ်းပိုက်နိုင်ဘဲ ရှိနေရလေသည်။
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဒုတိယစစ်အပြီး အောက်မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းယူခဲ့စဉ်ကတည်းကပင် သူ့ကျွန်မခံလိုသော သာယာဝတီနယ်မှ ဗိုလ်ခေါင်းကြီး၊ ဗိုလ်ခေါင်းကလေးစသော မျိုးချစ်များက အင်္ဂလိပ်များကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒုက္ခပေးခဲ့ပေသည်။ ထိုဒုတိယစစ်ပွဲ အတွင်းကပင်လျှင် မဟာနေမျိုးနှင့် ရှမ်းစော်ဘွားများသည် ၀က်ထီးကန်တွင် အင်္ဂလိပ်တပ်များကို မရှုမလှ ဖြစ်စေခဲ့ပေသေးသည်။ နတ်ရှင့်ရွေးဗိုလ်၊ ဗိုလ်သာပုံ၊ ဗိုလ်သာဦး၊ ဗိုလ်ကျော်ဇံလှ၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်း စသော မျိုးချစ်အများကလည်း အင်္ဂလိပ်ကို တော်လှန်ခဲ့ကြပေသည်။ အင်္ဂလိပ်နှင့် နောက်ဆုံး စစ်ပြီးငြိမ်းသွားသည့်နောက်တွင်လည်း သူ့ကျွန်မခံသော တော်လှန်မှုများမှာ နှစ်စဉ်နှစ်ဆက် မပြတ်မလပ်ပင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေသည်။ ဗိုလ်ရွှေနှင့် ဦးလှော်ဆိုသူတို့ကား ရွှေလွှတ်တော်မှ လက်နက်ချရန် အမိန့်ကိုပင် ဖီဆန်ကာ ပြန်လှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေသည်။ ပုဂံမှ ဗိုလ်ချို၊ ပုပ္ပါးမှ ဗိုလ်နက်ကျော်၊ ၀န်းသိုစော်ဘွား ဦးအောင်မြတ်၊ ရွှေဘိုမှ ထိပ်တင်မှတ်၊ ကျောက်ဆည်မှ ဗိုလ်သာကျန်း၊ ဆင်ဖြူကျွန်းမှ ဦးဥတ္တမ၊ ၀ဲလောင်မှ ဗိုလ်ရာညွန့်၊ ကျွန်းခင်းကြီးမှ ဗိုလ်လှကျော်၊ မင်းတုန်းမှ ဗိုလ်ရွဲ၊ ဆီးပင်ကြီးမှ မြင်စိုင်းမင်းသား၊ ရှိမ္ဗကားမှ ဗိုလ်ရိုင်း၊ နတ်မောက်မှ ဗိုလ်မင်းရောင် စသည်ဖြင့် များလှစွာသော မျိုးချစ်များက အင်္ဂလိပ်အား ဆက်လက်တော်လှန်ခဲ့သည့်ပြင် ချင်းအမျိုးသား၊ လူရှိုင်းအမျိုးသားနှင့် ကချင်အမျိုးသားများကလည်း အင်္ဂလိပ်တပ်များကို ခုခံတိုက်ခိုက်ကြသည်သာ ဖြစ်လေသည်။
အင်္ဂလိပ်အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံကို ပရိယာယ်နှင့် သိမ်းပိုက်ရန် လွယ်ကူသလောက် ငြိမ်ဝပ်အောင် ထိန်းသိမ်းရသည်မှာ မလွယ်ကူပေ။ လက်ရွေးစင်တပ်သား လေးသောင်းမှ ငါးသောင်းအထိ အသုံးပြု၍ ခေတ်မီအမြောက်၊ သေနတ်တို့ဖြင့် တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းသည့်တိုင်အောင် ငါးနှစ်ကျော်မျှ အကြီးအကျယ် အပင်တပန်း တိုက်ခဲ့ရလေသည်။ တော်လှန်သူများမှာ အဆက်အသွယ်မရှိဘဲ အစိပ်စိပ်ကွဲ၍ ရရာလက်နက် တုတ်၊ ဓားတို့ကို အားကိုးတော်လှန်ရသည် ဖြစ်သောကြောင့်သာ နောက်ဆုံး အင်္ဂလိပ်တို့ နှိမ်နင်းနိုင်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ သို့တိုင်အောင် ၁၂၅၇ ခုနှစ်အထိ အသေးအဖွဲ တော်လှန်လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေသည်။
Photo: Internet (Google Search)
Posted by Ko Nyan Posted Time 2:37 PM 1 Comment(s) Link This
စိတ်အလို လက်မလိုက်နိုင်ဖြစ်နေရပြီး သဝေမထိုးနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်
ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပြီး ဘာတွေအဆန်းထွင်ပြန်ပြီလဲလို့ မတွေးကြစေချင်ပါ။ ဒီကောင်ဉာဏ်ကြီး ဘယ်တွေကို သဝေထိုးနေလို့ အခုကျမှ သဝေမထိုးနိုင်ဘူး ပြောနေရတာလဲလို့ ဆန္ဒတွေ မစောလိုက်ပါနဲ့ဦးနော်။ အဖြစ်က ဒီလိုခင်ဗျ…. ဒီလို။
မနေ့ညနေက ကော်ဖီခွက်တွေဆေးရင်း ကျကွဲမယ့်ခွက်တစ်လုံးကို ကပျာကယာ လက်လှမ်းလိုက်မိရာက ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်သန်းကို ကြွေခွက်ကွဲရှသွားပါတယ်။ အစကတော့ ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိပါဘူး။ ဘေစင်မှာ ပန်းကန်ဆေးနေရင်းနဲ့ ခွက်တစ်လုံးပြုတ်ကျမလို ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် လက်လှမ်းလိုက်တယ်။ ခွက်ကအောက်ပြုတ်မကျသွားဘဲ ဘေစင်ထဲကို ပြန်ကျလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ခလွမ်ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ ကျွန်တော့်လက်ကနေ သွေးတွေချက်ချင်း စီးကျလာခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး။ ခါတိုင်းတွေလိုပဲ အပေါ်ယံရှပ်ထိတာလောက်ပဲ ထင်တဲ့အတွက် သွေးထွက်နေတဲ့လက်ကို ရေဆေးပြီး ပလာစတာကပ်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရေသာဆေးနေရတယ်၊ သွေးထွက်တာက မရပ်တဲ့အတွက် သေချာကြည့်မိတော့မှ အပေါ်ယံ အရေပြားတင်မဟုတ်ဘဲ အသားပါ,ပါသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သွေးကလည်း ဘာထွက်သလဲမမေးနဲ့။ ဘေစင်နဲ့ ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်မှာ တပေါက်ပေါက်နဲ့ကို ကျနေတော့တာ။ ကော်ဖီခွက်က လက်ကိုင်မရှိတော့တာကို အဲဒီကျမှ တွေ့တယ်။ ခွက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ လက်ကိုင်အကျိုးက လက်သန်းကို စောင့်ထိုးလိုက်သလို ဖြစ်သွားတာပါ။ ကွဲနေတဲ့လက်သန်းကို ပုဆိုးနဲ့ အသာအုပ်ပြီး သူငယ်ချင်းကို လှမ်းအော်ရတယ်။ သေတ္တာထဲမှာရှိတဲ့ ဆေးပစ္စည်းထုတ်ထဲက ပလာစတာလေးထုတ်ပြီး ကပ်ပေးဖို့ပါ။ ကွဲသွားတာက ကြီးတဲ့အပြင် သွေးကမတိတ်တဲ့အတွက် ပလာစတာကပ်လို့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး။ ဂွမ်းလည်း အတော်ကုန်သွားတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဂွမ်းနဲ့ခဏပိတ်ပြီး ပတ်တီးစည်းထားလိုက်တယ်။
ရေချိုးလို့ မရတော့တဲ့အတွက် ကောင်းနေတဲ့ ညာဖက်လက်ကလေးနဲ့ပဲ မျက်နှာသစ်ပြီး အ၀တ်အစားလဲရတယ်။ တော်တော်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ အ၀တ်အစားတွေကို ၀တ်လိုက်ရတယ်။ ရာသီဥတုက အေးတဲ့အပြင် လက်ကလည်း သွေးမတိတ်ဘဲ နည်းနည်းစီကိုက်လာတဲ့အတွက် ဆေးခန်းပြမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ဆေးခန်းကို ပြေးရတော့တာပေါ့။ အစကတော့ တစ်ယောက်တည်းသွားမလို့ပါပဲ။ လမ်းသွားရင်းနဲ့မှ ထိခိုက်ရှနာဆိုတော့ သေချာပေါက် အရက်ပြန်ဆေးမှာပဲဆိုပြီး ငယ်ငယ်ကလေးဘ၀တုန်းက အနာကို အရက်ပြန်ထည့်တဲ့အချိန်မှာ ဘေးကနေ လေမှုတ်ပေးတာလေးကို သတိရမိပြီး ညီငယ်တစ်ယောက်ကို ၀င်ခေါ်သွားလိုက်တယ်။ လက်ကိုအောက်ချထားရင် သွေးကျပြီး ကိုက်နေတဲ့အတွက် ဘယ်ဖက်လက်တစ်ခုလုံးကို အပေါ်ကို မ,ထားရတယ်။
ဆေးခန်းမှာ တာဝန်ကျသူနာပြုက စည်းလာတဲ့ပတ်တီးကို ဖြေလိုက်တဲ့အထိ သွေးမတိတ်သေးဘူး။ ဒီလောက် ရာသီဥတုက အေးနေတာကို သွေးကလည်း ထွက်ပဲထွက်နိုင်လွန်းတယ်။ အရက်ပြန်နဲ့ဆေးတယ်၊ ကျွန်တော်ထင်သလို စပ်ဖို့နေနေသာသာ သိတောင်မသိလိုက်ဘူး။ ဂွမ်းအဖြူနဲ့ပဲ သုတ်နေတယ်ထင်နေတာလေ။ အရက်ပြန်စိမ်ထားမှန်း ပြီးမှသိတာ။ လက်ကလည်း ထုံနေတာကိုး။ စစ်ဆေးပြီး အရိုးကိုမထိကြောင်းပြောပါတယ်။ ဆေးထည့်ပေးပြီး ပတ်တီးစည်းပေးလိုက်တယ်။ သောက်ဆေးလည်း ပေးလိုက်တယ်။ နက်ဖြန်မနက်တော့ ပြန်လာပြပါတဲ့။
သူငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်။ တစ်ပတ်လောက်တော့ ပို့စ်အသစ်တွေ မဖတ်ရတော့ဘူးပေါ့တဲ့။ "အင်း… ဟုတ်တယ်" လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ပေမယ့် ခေါင်းထဲမှာစဉ်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ညစ်မိတာတော့ အမှန်ပဲ။ လက်ကောင်းနေတုန်း ဒီလောက်အချိန်ရသလို တင်ပေးနေတာတောင် စိတ်ကျေနပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အခုလိုသာ ပို့စ်မတင်ဘဲ နားလိုက်ရရင် အတော်လေးတော့ ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲလို့ တွေးနေမိတယ်။ ဒါပေမယ့် စာဖတ်ဖို့အချိန် ပိုရလာမှာသေချာတဲ့အတွက်တော့ ကျေနပ်သွားတယ်။ အရင်လို အချိန်လုပြီး စာဖတ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
သဝေမထိုးဘဲ တစ်ရက်လေးတောင် မနေနိုင်ပေါင်
အခုမနက်အိပ်ရာနိုးတော့ ဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားတယ်။ အစကတော့ စာဖတ်ဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကမရပါဘူး။ ကွန်ပျူတာရှေ့ကိုပဲ ရောက်တာပါပဲ။ အဲဒါနဲ့ ဒီပို့စ်ကို စရိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘယ်ဖက်လက်မှာ လက်သန်းက ပတ်တီးထူကြီးနဲ့ လုံးဝလှုပ်လို့မရတော့ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ လက်သန်းနေရာက ကီးဘုတ်ရဲ့ တကယ့်နေရာမှာ လက်တင်ရတာဆိုတော့ ပိုဆိုးတယ်။ A ရယ်၊ Shift Key ရယ်၊ ဇော်ဂျီမှာဆိုရင်တော့ သဝေထိုးရယ်၊ Dead Key ရယ်ကို နှိပ်လို့မရတဲ့အတွက် စာရိုက်တဲ့နေရာမှာ အတော်လေးကို ဒုက္ခရောက်တယ်ဗျ။
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်က ခေါင်းစဉ်မှာ သဝေထိုးလို့မရဘူးလို့ ပြောခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့်လက်သန်းလေး အနားယူနေရတယ်လေ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော် သဝေမထိုးနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ လက်သန်းရဲ့တာဝန်ကို လက်သူကြွယ်ကို ပေးလိုက်ရတာပေါ့။ အင်း ပုံမှန်အတိုင်း စဉ်းစားကြည့်ရင် လက်သန်းက ဘာမှအသုံးမ၀င်သလောက်ပဲဗျ။ အခုလို စာရိုက်တဲ့ကီးဘုတ်နေရာကျတော့လည်း တစ်ချောင်းဆိုတစ်ချောင်း လစ်ဟာသွားတာနဲ့ အရမ်းကိုသိသိသာသာကြီး ဒုက္ခရောက်သွားတယ်။ လက်သန်းက အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် သူ့အစား အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ လက်သူကြွယ်က တာဝန်ယူရတာပေါ့။ သူကတော့ အလုပ်နှစ်မျိုး ထမ်းဆောင်ရတာပေါ့လေ။ ကျွန်တော်တို့ လူမှုဝန်းကျင်မှာလည်း အဲဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေ ရှိတာပဲမဟုတ်လား။
သြော်… ကဘောက်တိကဘောက်ချာတစ်ခု ပြောပြရဦးမယ်။ လက်သန်းအစား လက်သူကြွယ်ကိုသုံးပြီး စာရိုက်တာ အတော်ကို အဆင်ပြေနေပြီ။ ဘယ်လောက်တောင် အဆင်ပြေသလဲဆိုရင် အခုဆို လက်သူကြွယ်ကိုနှိပ်တိုင်း သဝေထိုးနဲ့ ဆလိမ်ချည်းပဲ ပေါ်နေတယ်။ မူလစာလုံးတွေဖြစ်တဲ့ ယပင့်၊ တ၀မ်းပူတို့ မပေါ်တော့ဘူး။ (ဥပမာပြောရရင် ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဖို့ သုံးခါလောက် ပြန်နှိပ်ရတယ်။ ကျွန်ဆော် ဆိုတာချည်းပဲ ဖြစ်နေလို့။ ရတယ်ဆိုရင်လည်း ရဆယ်လို့ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ရယ်ချင်လိုက်တာဗျာ။
ကဲ… စကားကြောရှည်နေတာ တော်ပါပြီဗျာ။ နေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ပို့စ်တွေ နည်းသွားမှာ အသေအချာပါပဲ။ မတင်ဘဲကတော့ နေနိုင်မှာ မဟုတ်တာသေချာတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်အဆင်ပြေသလောက်ဆော့ တင်ပေးသွားမှာပါ။ ဒီပို့စ်ကို ရိုက်ဖို့အတွက် ၄၅ မိနစ်လောက် အချိန်ပေးလိုက်ရတာကိုဆော့ မကျေနပ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ စိတ်ပဲရှိတာ.. လက်ကမှ မလိုက်နိုင်တာကိုး။ စိတ်အလို လက်မလက်နိုင် ဖြစ်နေကြောင်းပါ။
နံနက် ၆ နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:27 AM0Comment(s) Link This
Super Power (အင်အားကြီးနိုင်ငံ)
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာတွင် စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံများကို စူပါပါဝါအဆင့်တွင် ထည့်တွက်သည်။ ၁၉၉၀ နှစ်များ စောစောပိုင်းအထိတိုင်အောင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု နှစ်နိုင်ငံကိုသာ စူပါပါဝါဟု သုံးနှုန်းခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဆိုဗီယက်စီးပွားရေး ယိုင်နဲ့လာသောအခါ တရုတ်ပြည်ကို စူပါပါဝါဟု ရည်ညွှန်းမှုများ ရှိလာသည်။ သို့သော် တရုတ်ပြည်သည် စီးပွားရေးအင်အား တောင့်တင်းလာသော်လည်း နျူကလီးယားလက်နက်များ တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုဘဲ မိမိကိုယ်မိမိ အင်အားကြီးနိုင်ငံအဆင့်ဟူ၍ မခံယူချေ။ ဆိုဗီယက်သည် ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲပြီးနောက် စီးပွားရေးအင်အား ကျဆင်းသွားရုံမက အရှေ့ဥရောပ နိုင်ငံများအပေါ်၌လည်း သြဇာအာဏာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ယခုအခါ လက်တွေ့သဘောအားဖြင့် စူပါပါဝါဟု ပြောနိုင်သည်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တစ်ဦးတည်းသာ ရှိတော့သည်ဟူသော ယူဆချက်များလည်း ရှိသည်။ တစ်နိုင်ငံချင်းအနေဖြင့် မဟုတ်ဘဲ အစုအဖွဲ့အနေဖြင့် ပြောမည်ဆိုလျှင် ဥရောပသမဂ္ဂသည် စူပါပါဝါအဖြစ် ထည့်တွက်၍ရသည်။
(ရန်ကုန်တိုင်းမ် ဂျာနယ် အတွဲ ၆ အမှတ် ၄၊ မောင်ဝံသ ၏ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး ဝေါဟာရအဘိဓာန် မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:25 AM0Comment(s) Link This
Old Trafford မှာ သရဲနီတွေရဲ့ ခြောက်လှန့်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတဲ့ မန်စီနီနဲ့ မန်စီးတီး
ပြိုင်ပွဲ - ကာလင်းဖလား ဆီးမီးဖိုင်နယ် (ဒုတိယအကျော့)
နေရာ - အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်၊ မန်ချက်စတာ။
ယှဉ်ပြိုင်သည့်အသင်းများ - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် Vs မန်ချက်စတာစီးတီး
ပထမအကျော့ - မန်ချက်စတာစီးတီး ၂ ဂိုး - ၁ ဂိုး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်
ဒုတိယအကျော့ - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ၃ ဂိုး - ၁ ဂိုး မန်ချက်စတာစီးတီး
နှစ်ကျော့ပေါင်း - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ၄ ဂိုး - ၃ ဂိုး မန်ချက်စတာစီးတီး
ကားလင်းဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ အနီးဆုံးနေရာကို အရောက်လှမ်းသွားတဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်
မနေ့ညက ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ ကားလင်းဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် (ဒုတိယအကျော့)ပွဲစဉ်မှာ မန်ယူက မန်စီးတီးအသင်းကို ၃ ဂိုး - ၁ ဂိုး ဖြင့် အနိုင်ရရှိပြီး နှစ်ကျော့ပေါင်းရလဒ် ၄ ဂိုး - ၃ ဂိုးဖြင့် ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်လုပွဲမှာ အက်စတွန်ဗီလာနဲ့ တွေ့မယ်။
မနေ့ညကပွဲမှာ အဓိကပြောစရာဖြစ်ခဲ့တာကတော့ အမှားအနည်းဆုံးနဲ့ ကစားသွားနိုင်ခဲ့တဲ့ မန်ယူနောက်တန်းပါပဲ။ ဂိုးသမား ဗန်ဒါဆားက ဂိုးပေါက်ကို တာဝန်ယူခဲ့ပြီး သူ့ရှေ့ကခံစစ်တံတိုင်းကြီးတွေအဖြစ် ဖာဒီနန်၊ အီဗန်၊ အီဗရာ၊ ရာဖေးလ်တို့ ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ မန်စီးတီးရဲ့ အသက်ဖြစ်တဲ့ တောင်ပံနှစ်ဖက်က ဘယ်လာမီနဲ့ ရိုက်ဖီးလစ်တို့ကို မန်ယူရဲ့ ရာဖေးလ်နဲ့ အီဗရာတို့က အကောင်းဆုံးဟန့်တား ထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ညာတောင်ပံခံစစ်ကစားခဲ့တဲ့ ရာဖေးလ်ဟာ ဘယ်လာမီကို လုံးဝကို ဘောလုံးမထွက်နိုင်အောင် ခပ်ကြမ်းကြမ်းပိတ်ဆို့ကစားပြီး ထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရာဖေးလ်ကို မကျော်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ဘယ်လာမီဟာ စိတ်တိုပြီး မမှားသင့်တာတွေမှား၊ မလုပ်သင့်တာတွေလုပ်ပြီး ဘောလုံးတွေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ပွဲမစခင်က အလယ်တန်းမှာ ၅ ယောက်အထိ ထားကစားတဲ့ ဖာဂူဆန်ရဲ့ နည်းဗျူဟာကို လုံးဝကို နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဂစ်၊ ဖလက်ချာ၊ ကားရစ်၊ နာနီနဲ့ ပေါစခိုးလ်တို့ရဲ့ အလယ်တန်းအတွဲကို ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလားလို့ သံသယနဲ့ စိုးရိမ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖာဂူဆန်ဟာ ဖာဂူဆန်ပါပဲဆိုသလိုပါပဲ။ မနေ့ညကပွဲကို အဓိကထိန်းချုပ်မောင်းနှင်သွားတာက မန်ယူအလယ်တန်းပါ။ အထူးသဖြင့် သက်ကြားအိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပေါစခိုးလ်နဲ့ ဂစ် နှစ်ယောက်စလုံး ငယ်မူခြေသွေးအပြည့်နဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသွားနိုင်ခဲ့တာဟာ အများကြီးစကားပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ မန်စီးတီးက ဘယ်ရီက ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဂစ်က မန်ယူတိုက်စစ်ကို အကောင်းဆုံးပုံဖော်ပေးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖာဂူဆန်ရဲ့လုပ်ရပ် မှန်ကန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို မန်ယူသွင်းသွားတဲ့ ၃ ဂိုးမှာ ၂ ဂိုးက အလယ်တန်းကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ပေါစခိုးလ်နဲ့ ကားရစ်သွင်းသွားတာကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါတောင် ဖလက်ချာအနေနဲ့ သေချာပေါက်အပိုင်ဂိုးရမယ့် အခွင့်အရေးတစ်ခု ဆုံးရှုံးသွားလို့သာပါ။
ဂိုးသွင်းခြေမှန်မှန်နဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေအတွက် တစ္ဆေဖြစ်လာတဲ့ ၀ိန်းရွန်းနီ
ဖာဂူဆန်ရဲ့ နည်းဗျူဟာအရ မနေ့ညကပွဲမှာ အထောင်တိုက်စစ်မှူးအဖြစ် ကစားခဲ့ရတဲ့ ရွန်းနီဟာ ပြိုင်ဘက်တွေအားလုံး ထိတ်တလန့်လန့်နဲ့ သတိထားရတော့မယ့် တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦး ဖြစ်လာနေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဟားလ်စီးတီးကို တစ်ဦးတည်း ၄ ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။ မနေ့ညကပွဲမှာလည်း ပွဲသိမ်းလက်သီးဖြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးမိနစ်အနိုင်ဂိုးကို နာကျင်အချိန်ပို ၂ မိနစ်မှာ ခေါင်းတိုက်ပြီး သွင်းယူသွားခဲ့တယ်။ ရွန်းနီရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်မှာ မန်စီးတီးရဲ့ အိပ်မက်တွေအားလုံး တစစီလဲပြိုသွားခဲ့ရတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို တမ်းတနေသူတွေအားလုံး ပါးစပ်တွေပိတ်ပြီး "ရွန်းနီ... ရွန်းနီ.... ရွန်းနီ..." လို့ အော်လိုက်ကြစမ်းပါ။ အခုဆိုရင် ရွန်းနီဟာ မန်ယူရဲ့ အိုက်ကွန်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကို ဘယ်သူများငြင်းချင်သေးတာလဲ။ အသင်းပြောင်းမှာကိုလား... စိတ်ပူမနေပါနဲ့။ ရွန်းနီဟာ စီရော်နယ်လ်ဒို မဟုတ်ပါဘူး။ ဘက်ဟမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ မန်ယူအတွက် ဂိုးတွေသွင်းပေးဖို့ ရွန်းနီရှိနေဦးမှာပါ။
သက်ကြားအိုကြီး ပေါစခိုးလ်က ၁၈ ကိုက်ထိပ်ကနေ ဂိုးသမားဂစ်ဗင်းရဲ့ ညာဖက်ထောင့်ကို မြေနိမ့်ဘော ကန်သွင်းသွားတယ်။ ဂိုးရှေ့မှာ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာကို ဆက်မတိုးဘဲ နောက်ကိုဘောလုံးချပေးလိုက်တဲ့ ကားရစ်ရဲ့ အကွက်မြင်မှုကြောင့်ပါ။
ခြေပေါ်ခဲ့တဲ့ နာနီက အံ့သြဖွယ်ရာဖန်တီးပေးမှုအဖြစ် ဖလက်ချာကို ချပေးရာမှာ ဖလက်ချာရင်ဘတ်နဲ့ထိန်းပြီး တိုက်ရိုက်ကန်သွင်းဖို့ လုပ်ပေမယ့် အချိန်မမီခဲ့ဘူး။ နောက်တန်းနဲ့ငြိပြီး ပျက်တော့မယ့်ဘောလုံးကို ဖလက်ချာက မရအရခြေဖျားလေးနဲ့ထိုးပြီး ကားရစ်ကို ချပေးလိုက်တယ်။ ကားရစ်ကလည်း စကေးလ်ကိုက် လှလှပပပဲ ဂိုးသမားနဲ့ နောက်တန်းတွေကြားကနေ အသာလေးမြေလိမ့်ဘော ကန်သွင်းလိုက်တယ်။
မန်စီးတီးက တိဗက်ဇ်ရဲ့ ချေပဂိုး
ရာဖေးလ်ကိုထုတ်ပြီး ဘရောင်းနဲ့ လဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ လှုပ်ခွင့်ရသွားတဲ့ ဘယ်လာမီက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကန်တင်ပေးလိုက်တာကို အီဗန်ခေါင်းတိုက်နေတဲ့ကြားက တိဗက်ဇ်က နောက်ပြန်ခြေနဲ့ပေါက်သွင်းသွားတာပါ။ ဘာပဲပြောပြော သရဲနီတပ်သားဟောင်းကြီးခမြာ နှစ်ပွဲပေါင်းမှာ မန်ယူအသင်းဘက်ကို ၃ ဂိုးအထိ သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကိုတော့ ချီးကျူးမိပါတယ်။
တိဗက်ဇ်ဂိုးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက် နှစ်ကျော့ပေါင်းရလဒ် ၃ ဂိုးစီနဲ့ သရေပွဲဖြစ်တော့မယ်လို့ အားလုံးက ထင်မှတ်လိုက်ကြတယ်။ ပင်နယ်တီကန်ရတော့မယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဖိအားဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီးတို့ ကစားကွက်ပျက်သွားတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး မန်ယူက တရစပ်မနားဘဲ တိုက်စစ်ဆင်တာမှာ ထောင့်ကန်ဘောဖြစ်သွားတယ်။ ဗလင်စီယာနဲ့ ဂစ် အပေးအယူလုပ်ပြီး ဂစ်ကန်တင်ပေးလိုက်တာကို ၀ိန်းရွန်းနီက မလွတ်တမ်း လှလှပပ ခေါင်းခုန်တိုက်သွင်းကာ မန်စီးတီးကို ကားလင်းဖလားလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေ ကန်ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး အက်စတွန်ဗီလာနဲ့ ဗိုလ်လုပွဲမှာတွေ့မယ်လို့ အခိုင်အမာ နာမည်ရေးထိုးလိုက်တယ်။
စိတ်မကောင်းတာက မနေ့ညကပွဲမှာ မန်စီးတီးက ဘယ်လာမီ ထောင့်ကန်ဘောကန်မယ်အလုပ်မှာ မန်ယူပရိသတ်က ပေါက်လိုက်တဲ့ အကြွေစေ့ထိမှန်သွားလို့ပါ။ ခေါင်းပေါက်၊ ထိပ်ပြဲမဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကွင်းမှာလာကန်တဲ့ ဧည့်သည်ကစားသမားကို ဒါမျိုးလုပ်တာကိုတော့ မန်ယူပရိသတ်ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သည်ဖြစ်စေ အားပေးတဲ့နေရာမှာပဲ ပြိုင်ဆိုင်စေချင်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ကိုယ်ထိလက်ရောက် အကြွေစေ့နဲ့ပစ်တာမျိုးကတော့ လုံးဝကို မဖြစ်သင့်တဲ့အပြင် အင်မတန်မှကို ဘောလုံးအားကစားလောကအတွက် အရုပ်ဆိုးစေတဲ့အတွက် ကန့်ကွက်ပါတယ်။ အကြွေစေ့မှန်ပြီး ဘယ်လာမီလဲကျနေချိန်မှာ နောက်ထပ် ဘီယာပုလင်းနှစ်လုံး ၀င်လာပါသေးတယ်။ အဲဒီဘီယာပုလင်းတွေများ ဘယ်လာမီရဲ့ခေါင်းကိုမှန်ခဲ့ရင် ခေါင်းပေါက်မှာ အသေအချာပါပဲ။ ကိုယ့်မန်ယူအသင်းသားကို အခြားကွင်းသွားကန်တဲ့အခါ အဲဒီလိုမျိုး လုပ်ခဲ့ရင် မန်ယူပရိသတ်တွေ ကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူများကစားသမားတွေကိုလည်း အဲဒီလိုမလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒါဘီပွဲများစွာ ကြည့်နေကြရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သလို၊ တစ်ခါတစ်လေ အိပ်ငိုက်ရတဲ့အထိ ပျင်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ မန်ချက်စတာဒါဘီကတော့ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ ရသတွေကို အမြဲတမ်းပေးတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲတွေ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့နှစ်သင်း ဆုံတွေ့ကြတိုင်း ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်စွာနဲ့ အမြဲတစေ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ မနေ့ညကပွဲမှာလည်း ပွဲပြီးတဲ့အထိ ပရိသတ်ကို ရင်တဖိုဖိုဖြစ်အောင် လုပ်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မနေ့ညက (အမှန်ဆိုရင် ဒီနေ့မနက်ဖြစ်ရမှာ၊ မနက် ၂း၃၀ နာရီမှာ ထကြည့်ရတာကိုး) ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ကားလင်းဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် (ဒုတိယအကျော့) ပွဲစဉ်ကို ချမ်းချမ်းစီးစီး မှောင်နဲ့မည်းမည်းမှာ အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး ထကြည့်ခဲ့ရတာ၊ ၂ ပေစလောင်းတွေ၊ TATA လိုင်း၊ MRTV-4 တွေက မလွှင့်တဲ့အတွက် ၈ ပေစလောင်းရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ်ကို နှင်းတောထဲမှာ ၁၀ မိနစ်လောက် ဆိုင်ကယ်စီးပြီး သွားကြည့်ခဲ့ရ၊ ပြန်လာခဲ့ရတာတွေဟာ ပေါစခိုးလ်၊ ကားရစ်နဲ့ ရွန်းနီတို့ရဲ့ ဂိုးတွေကြောင့် ပျော်ရွှင်မှု၊ ၀မ်းမြောက်မှု၊ ကျေနပ်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်တော့ ဘာမှမပြောပလောက်တဲ့ မြူမှုန်လေးတွေ ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။
Bravo Manchester United!
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၈ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့။
နေ့လည် ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Labels EPL, soccer
၁။ နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ဘယ်သူရေးစပ်ခဲ့သလဲ
၂။ နိုင်ငံတော်သီချင်းဆောင်းပါးအတွက် တွေးခဲ့မိတာလေးတွေ
7Day News ဂျာနယ်မှာပါခဲ့တဲ့ "နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ဘယ်သူရေးစပ်ခဲ့သလဲ"ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကစခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အခုထိ မပြီးသေးပါဘူး။ အဲဒီဆောင်းပါးကို ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့စဉ်ကတည်းက နောက်ဆက်တွဲ ရေးသားခဲ့သလို ဆောင်းပါးပါအကြောင်းအရာတွေဟာ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူး၊ သိဖူးထားတာတွေနဲ့ မတူခြားနားပြီး တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟာ စောင့်ကြည့်ဂျာနယ်မှာပါလာတဲ့ "နိုင်ငံတော်သီချင်းရှင်းတမ်း" ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကြောင့် ပိုလို့သေချာသွားသလို အသက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လုံးဝကြီးစိတ်ကျေနပ်သွားတာ စိတ်ရှင်းသွားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုအချိန်ထိ ရင်ထဲမှာ အလိုမကျနဲ့ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေဆဲပါ။ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် မဟုတ်သေးတာတော့ အသေအချာပါပဲ။ ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ရေးတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြားသော မူကွဲဆောင်းပါး၊ အကြောင်းအရာ ရှိသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဆောင်းပါးတွေ ဘယ်လောက်ပဲရေးရေး အားလုံးရဲ့အဖြေဟာ တစ်ခုတည်းဆိုရင် အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ရေးသမျှဆောင်းပါးအကုန်လုံးက တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ မှန်နေကြတာဆိုရင်တော့ ဒါဟာ တစ်မျိုးဖြစ်ရုံတင် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အားလုံးက၀ိုင်းဝန်းစဉ်းစား အဖြေရှာဖို့ အရေးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ ဆိုချင်တာပါ။
ပထမဆုံး ဘာမှမပြောခင် ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ချင်လွန်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတာလေးတွေကို ပြောပြချင်သေးတယ်။ မှတ်တမ်းလေးလည်း ဖြစ်ချင်တာကြောင့်ပါ။ တစ်ရက်မှာ ညီငယ်တစ်ယောက်က ပြောလာတယ်။ အစ်ကိုကြီးရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ နိုင်ငံတော်သီချင်း ဘယ်သူရေးသလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရတယ်ပေါ့။ နောက်ပြီးဆက်ပြောတာက စောင့်ကြည့်ဂျာနယ်မှာ နိုင်ငံတော်သီချင်းရှင်းတမ်းဆိုပြီး ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါလာတယ်။ အစ်ကိုဖတ်ပြီးပြီလားပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း အတော်ပျော်သွားတယ်။ မဖတ်ရသေးဘူးပေါ့။ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ လိုက်ရှာနေပြီး မတွေ့သေးတဲ့ ဆောင်းပါးများဖြစ်နေမလားဆိုပြီး အတော်ပျော်သွားတယ်။ ကျွန်တော်အပတ်စဉ် ၀ယ်ယူဖတ်ရှုတဲ့အထဲမှာ စောင့်ကြည့်ဂျာနယ်မပါတဲ့အတွက် သူ့ဆီမှာရှိတဲ့ ဂျာနယ်ကို ကျွန်တော့်ကို ခဏငှားပါဦး။ အဲဒီဆောင်းပါးကို မိတ္တူကူးပြီးရင် ပြန်ပေးပါ့မယ်လို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ သူကလည်း စိတ်ချပါဆိုပြီး ကတိတွေ အထပ်ထပ်ပေးသွားပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ စိတ်မချပေမယ့် မဖြစ်စလောက် မျှော်လင့်ချက်၊ ယုံကြည်မှုလေးနဲ့ သူဘယ်နေ့များ အဲဒီဂျာနယ်လာပေးမလဲလို့ မျှော်ခဲ့ရတာပေါ့။ ဂျာနယ်လာပေးဖို့ဝေးစွ၊ အဲဒီလိုပြောပြီးတဲ့နေ့ကလည်းက ကျွန်တော်နဲ့ မတွေ့တော့တာ အခုဒီပို့စ်ကို ရေးနေတဲ့အချိန်အထိပဲ ဆိုပါတော့။ သူ့အကြောင်းနဲ့သူ ရှိမှာပါလေ။
စကားဆက်ရရင် အဲဒီဆောင်းပါးကို မဖတ်ရသေးလို့ လူကစိတ်ထဲမှာ မကြည်မလင်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှ The Voice Weekly အတွဲ ၆ အမှတ် ၁၂ မှာ ကောက်နုတ်ချက်ကဏ္ဍကနေ အဲဒီဂျာနယ်မှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးကောက်နုတ်ချက်ကို ထည့်ပေးလိုက်တော့ ပိုဆိုးသွားတယ်။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမှ ကိုယ်ဖတ်ချင်တာဖတ်ရမည်ဆိုတာကို နားလည်သွားလိုက်တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖတ်ချင်တာကို သူများကိုအားကိုးတကြီးနဲ့ စောင့်မျှော်နေမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အတော်ဒေါသထွက်သွားမိတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရတော့တာပေါ့။ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်နိုင်တာကို အရင်စလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်နေ့စဉ် ဂျာနယ်ယူနေကျဆိုင်မှာ လက်ကျန်ဂျာနယ်ဟောင်း ရှိ၊ မရှိ မေးကြည့်တော့ ကျွန်တော်ကြိုပြီးမျှော်မှန်းထားသလိုပါပဲ၊ မရှိပါဘူးတဲ့။ အဲဒီနေ့ကဆို နောက်အပတ်စဉ်ထုတ် စောင့်ကြည့်ဂျာနယ်တောင် ထွက်ပြီးနေပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ အဲဒီဂျာနယ်ကို ပုံမှန်အပတ်စဉ်ယူတဲ့လူ မရှိဘူးလားဆိုတော့ ရှားရှားပါးပါး တစ်ဦးတည်းသာ ရှိပါတယ်တဲ့။ အဲဒါကလည်း ဟိုတယ်တစ်ခု ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စာအုပ်ဆိုင်ကိုပဲ အကူအညီတောင်းရတော့တာပေါ့။ အရင်အပတ်က စောင့်ကြည့်ဂျာနယ်ကို ခဏဖြစ်ဖြစ် ငှားပေးလို့ရမလားပေါ့။ မိတ္တူကူးချင်တာလေး ရှိလို့ပါပေါ့။ စာအုပ်ဆိုင်ကလည်း လိုလိုလားလားပါပဲ။ အဲဒီဟိုတယ်က ဂျာနယ်လာယူရင် ခဏငှားပေးဖို့ ကူညီပြောပေးပါမယ်တဲ့။ အဲဒီဆောင်းပါးကို ကျွန်တော်ဖတ်ရတော့မယ်ဆိုတာကို သေချာပေါက် ယုံကြည်သွားတယ်။
မနေ့ညနေက ဂျာနယ်သွားယူတော့ စာအုပ်ဆိုင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းထားတဲ့ စောင့်ကြည့်ဂျာနယ်ကို ချက်ချင်းထုတ်ပေးပါတယ်။ မိတ္တူကူးပြီးရင် နက်ဖြန်မနက်စောစော ပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းသာအားရနဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားတောင် ပြောမိသလားဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မမှတ်မိဘူး။ ပိုက်ဆံပါမလာတဲ့အတွက် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်အထိ သွားပြီးခါမှ သူငယ်ချင်းဆီကနေ ပိုက်ဆံခဏချေး၊ ကပ်လျက်က မိတ္တူဆိုင်မှာ စိတ်နာနာနဲ့ မိတ္တူနှစ်စုံတောင် ကူးပစ်လိုက်တယ်။ ကံများကောင်းချင်တော့လည်း မိတ္တူဆိုင်က စာရွက်နှစ်ရွက်ပဲကူးတာကို ပိုက်ဆံယူရမှာ အားနာလို့ထင်ပါရဲ့။ မပေးပါနဲ့ဆိုပြီး အလကားကူးပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လိုချင်တာကို ရသွားတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မိတာ ဘာနဲ့မှကို မတူပါဘူးဗျာ။ ငှားထားတဲ့ဂျာနယ်ကို နက်ဖြန်အထိ မစောင့်တော့ဘဲ မြို့ထဲအထိတစ်ခေါက်ပြန်ပြီး တကူးတကကို ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ မှတ်မှတ်ယယကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောခဲ့ပါတယ်။ ငှားပေးတဲ့ဟိုတယ်က လူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပေးစမ်းပါဆိုပြီး သေသေချာချာကို မှာခဲ့ပါတယ်။ အခုခင်ဗျားတို့ ဖတ်နေရတဲ့ "နိုင်ငံတော်သီချင်းရှင်းတမ်း" ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးက အဲဒီလိုရပြီးမှ ပြန်တင်ပေးခဲ့ရတာခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ခံချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တန်ဖိုးမထားမှာ စိုးတဲ့အတွက်ပါ။ တန်ဖိုးထားစေချင်တာပါ။
အခုကိစ္စကို ဘာကြောင့်ဒီလောက် သည်းသည်းမည်းမည်းဖြစ်နေရသလဲဆိုရင် နိုင်ငံတော်သီချင်းကိစ္စမို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ မွေးစကနေ သေဆုံးသွားသည်အထိ မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သီဆိုသည်ဖြစ်စေ၊ စာသားတွေကို ရွတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ရင်ထဲ၊ အသည်းထဲကနေ ကြက်သီးမွေးညင်းထလောက်အောင် ပြောင်မြောက်လှတဲ့၊ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အထိမ်းအမှတ်သီချင်းဖြစ်တဲ့ ဒီနိုင်ငံတော်သီချင်းကို ဘယ်သူရေးတာပါဆိုပြီး အတိအကျမပြောနိုင်ဘဲ သီဆိုခဲ့ရတယ်၊ သေသွားတဲ့အထိ ဆိုသာဆိုခဲ့ရတယ် ဘယ်သူရေးမှန်းမသိသွားဘူးဆိုပြီး အသေမဖြောင့်ဖြစ်မှာ စိုးတာကြောင့်ပါ။ နောက်ဆုံး သားသမီးမြေးမြစ်တွေကို ပြောပြမယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒီသီချင်းက ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်ဆိုတာပဲ ရှင်းပြနိုင်မှာပေါ့။ တကယ်လို့များ အဲဒီကလေးတွေက "အဲဒီသီချင်းကို ဘယ်သူရေးခဲ့တာလဲ ဖေဖေ/ဘိုးဘိုး/ဘိုးဘိုးကြီး" ဆိုပြီး မေးလာခဲ့ရင် မခက်ချေဘူးလားဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သားသမီးမြေးမြစ်တွေကရော မမေးကြဘူးလား။ မေးလာခဲ့ရင် ခင်ဗျားဘယ်လိုဖြေမလဲ။
အခုကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့ News Watch ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါးနဲ့ 7Day News ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်တွေဟာ နည်းနည်းပါးပါးမဟုတ်ဘဲ အတော်ကြီးကို ကွဲလွဲနေတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ အခုနိုင်ငံတော်သီချင်းရှင်းတမ်း ဆောင်းပါးကိုလည်း မူကွဲတစ်ခုအနေနဲ့သာ လိုလိုလားလား ဖတ်ခဲ့၊ မှတ်ခဲ့ရတာပါ။ News Watch မှာ ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးဟာ အဖိုးတန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ အမြင်မတော် ဆင်တော်နဲ့ခလောက်ဆိုသလို အချို့နေရာတွေမှာ စာမချောတဲ့အပြင် တချို့တချို့သော စာကြောင်းတွေဆိုရင် ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်းကို မသိပါဘူး။ ဥပမာပြရရင် "ဤကိစ္စကိုဆွေးနွေးရန် ဂီတအဖွဲ့ချုပ် အမှုဆောင်များသည် မြိုင်ဇာတ်ရုံအသင်းတိုက်တွင် ကျင်းပသည်" ဆိုတဲ့စာကြောင်းမျိုးက ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ပေါက်ပါသလဲ။ ဆောင်းပါးရေးသူက ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်နားလည်ပါသည်။ သို့သော် သူရေးထားတာက အဲဒီအဓိပ္ပါယ်မရောက်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အယ်ဒီတာတွင် လုံးဝတာဝန်ရှိသည်ဟု မြင်မိပါသည်။ အယ်ဒီတာတစ်ယောက်အနေနဲ့ စာကြောင်းတွေဖတ်လို့ချောအောင် အဓိပ္ပါယ်ပေါက်အောင်လောက်တော့ ပြုပြင်တည်းဖြတ်၊ ဒါမှမဟုတ် မူရင်းစာရေးသူကို ထောက်ပြအကြံပေးတာလောက်တော့ လုပ်သင့်သည်ဟု မြင်မိပါသည်။ သူ့ရဲ့တာဝန်ကိုက အယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်။ စာမူစုတာလောက်၊ စိစစ်ရေးတင်တာလောက်၊ စာမူခထုတ်ပေးတာလောက်ကိုသာ အယ်ဒီတာ့တာဝန်ဟု မှတ်ထင်နေသလားလို့ ကျွန်တော်တွေးနေမိသည်။ အခြားဆောင်းပါးများကို ကျွန်တော်မပြောလိုပါ။
အခုနောက်ပိုင်း ဂျာနယ်တွေမှာ စာလုံးပေါင်းအမှားတွေ ပလူပျံနေတာကို ကျွန်တော်မသိချင်ယောင်ဆောင်၍ ဖတ်ပါသည်။ ယခင်လိုတောင် ဂျာနယ်ဖတ်ရင်း မင်နီလိုက်မတားတော့ပါ။ စာလုံးပေါင်းမှားတာကိုတွေ့လိုက် မင်နီတားလိုက်နှင့် ကျွန်တော့်မှာ စာကိုပင် သေချာမဖတ်ရတော့ပါ။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် သူတို့ဂျာနယ်တွေကို စာလုံးပေါင်းစစ်ပေးနေသလို ဖြစ်နေသဖြင့် အဲဒီအလုပ်ကို စွန့်လွှတ်ထားလိုက်ရပါသည်။ အဲဒါက အဓိကမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုတဲ့စိတ် မွေးလိုက်ရသည်။
အယ်ဒီတာအနေဖြင့် ယခုလို ဆောင်းပါးမျိုးကိုတော့ ဂရုစိုက်သင့်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ ထင်ပါသည်ဟု မပြောလိုတော့ပါ။ ဂရုစိုက်ကိုစိုက်ရမည့်ဆောင်းပါးဟု ပြောချင်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်သီချင်းကိစ္စသည် မြို့လယ်တိုက်ခန်းက လူပြုတ်ကျလို့ သေသွားတာထက်၊ ၀က်မကြီးက လူကလေးတွေမွေးတာထက်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဗိုက်ကြီးတာထက်၊ တေးရေးဆရာတွေစုပေါင်းပြီး တေးရေးခတွေ တောင်းတာထက်၊ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်း တောင်ကိုရီးယားက အပျော်တမ်း တက္ကသိုလ်ဘောလုံးအသင်းကို ရှုံးတာထက် အများကြီးအများကြီး နှိုင်းမရအောင် ပို၍ အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ထက်ပိုသည်က ယခုဆောင်းပါးသည် အခြားဂျာနယ်တစ်ခုတွင် ဖော်ပြပါရှိပြီးသည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို မှားယွင်းနေကြောင်း ဖြေရှင်းရေးသားထားသည့်အတွက် ပိုမိုဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိမိဂျာနယ်ပါဆောင်းပါးဖြင့် အခြားဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါးကို မှားယွင်းကြောင်းပြောဆိုသည့် ဆောင်းပါးမျိုးကိုမှ အရေးတယူမလုပ်လျှင် မည်သို့သော စာမူကို အရေးတယူလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိသနည်းဟု မေးလိုက်ချင်ပါသည်။ စောင့်ကြည့်ဂျာနယ်၏ အယ်ဒီတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျွန်တော်မသိပါ။ ကျွန်တော်ကလည်း ဘာကောင်မှမဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကောင်းစေချင်သည့်အတွက် ထောက်ပြဝေဖန်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လုံးဝ(လုံးဝ) မပါကြောင်း သစ္စာဆိုပါသည်။
ယခုဆိုလျှင် "နိုင်ငံတော်သီချင်းရှင်းတမ်း" ဆိုသည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တည်းဖြင့် အဆိုပါဂျာနယ်ကို ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိသည့်အတွက် နောက်လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ထိုဂျာနယ်ကို အစမ်းယူမည်ဖြစ်ကြောင်း စာအုပ်ဆိုင်ကို ပြောထားလိုက်ပါသည်။ နောက်ထပ်တစ်ခု ထောက်ပြလိုသေးသည်။ ရှေ့ပိုင်းတွင် ဦးစိန်းမောင်ဟု ရေးထားသည်၊ နောက်တတိယနောက်ဆုံးပိုဒ်ရောက်တော့ ဦးစိန်မောင် ဖြစ်သွားသည်။ ၀စ္စနှစ်လုံးပေါက်လေး ကျန်တာများကွာလို့ မပြောကြပါနှင့်။ လူတစ်ယောက်၏ နာမည်သည် သူ၏ အသက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူနေထိုင်ကျင်လည်ခဲ့ရာ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးတွင် ကောင်းတာ၊ ဆိုးတာမှန်သမျှကို အဆိုပါနာမည်ဖြင့် မှတ်တမ်းကျန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဦးစိန်မောင် နှင့် ဦးစိန်းမောင်သည် လုံးဝကို ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ယခုဆောင်းပါးရေးသူ "တေဇအောင်"ကို ကျွန်တော်က "တေဇာအောင်"ဟု မှားရေးမိလျှင် လက်ခံကြပါမည်လားဟု တွေးမိသည်။
နောက်ဆုံးအပိုဒ်တွင် သမိုင်းဟူသည်…………. စသည်ဖြင့် အစချီကာ ဤစာမူကို ဘယ်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရေးသားထားကြောင်း ပြောထားပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ဆောင်းပါးရှင်ညွှန်းထားတဲ့ စာရေးဆရာကြီး (ဦး)သုခမိန်ဆိုတာ ဘယ်သူမှန်း ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ တူရိယာဂီတအဖွဲ့ချုပ် အမှုဆောင်စာရင်းမှာလည်း အဲဒီနာမည်ကို မတွေ့ပါဘူး။ အဖွဲ့လိုက်ခွဲပြီး သီချင်းရေးကြတဲ့အထဲမှာလည်း အဲဒီနာမည် မပါ,ပါဘူး။ ၀ိုင်အမ်ဘီသခင်တင် အထိမ်းအမှတ်ပွဲမှာ သီချင်းဆိုတဲ့လူ၊ တီးတဲ့လူ စာရင်းမှာလည်း မတွေ့ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို ညွှန်းထားသလဲဆိုတာကို ဖြေရှင်းသင့်လှပါတယ်။ အမှုဆောင်ထဲက တစ်ဦးဦးရဲ့ သား၊ သို့မဟုတ် ညီ၊ သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းတော်စပ်သူလား၊ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီအချိန်က သီချင်းရေးစပ်ရာမှာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦးလား ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနိုင်ငံတော်သီချင်းရေးတဲ့သူကိစ္စ ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေတာကို လုံးဝကို စိတ်မချမ်းသာပါ။ နိုင်ငံတော်သီချင်း၏ သက်တမ်းသည် အနှစ်(၈၀)သာ ရှိပါသေးသည်။ အနှစ်(၈၀၀) မဟုတ်ပါ။ ထိုမျှကာလသာရှိသေးသော သမိုင်းအချက်အလက်ကိုပင် ဘယ်ဟာအမှန်ဟု ကျွန်တော်တို့တွေ တိတိကျကျ၊ သေသေချာချာ မသိပါဘဲလျက် ပု၊ ပင်း၊ အင်း၊ တောင်၊ ညောင်၊ ကုန်းဘောင်ဆိုပြီး မြန်မာ့သမိုင်းစဉ်များကို ဖတ်နေ၊ မှတ်နေရသည်မှာ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်ရသည့်အပြင် ရင်နာလှပါသည်။ တိတိကျကျမှတ်တမ်းမထားဘဲ သမိုင်းမှတ်တမ်းအားနည်းသော ကျွန်တော်တို့လူမျိုး၏ စရိုက်တွေကို ပြင်ဆင်သင့်ပြီထင်ပါသည်။ အချိန်မီပါသေးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတွင် မွေးဖွားလာသည်မှ သေဆုံးသွားသည်အထိ ယနေ့မြန်မာလူမျိုးအားလုံး၊ နောင်မြန်မာလူမျိုးအားလုံး မြတ်နိုးဂုဏ်ယူစွာ သီဆိုနေကြရဦးမည့် နိုင်ငံတော်သီချင်းကို မည်သူရေးခဲ့သည်၊ သို့မဟုတ် မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို တစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ချင်းမဟုတ်ဘဲ တာဝန်ရှိသူများက ဦးဆောင်၍ ရှေ့မီနောက်မီပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် မနှေးအမြန် ၀ိုင်းဝန်းအဖြေရှာ ဖြေရှင်းပေးခြင်းဖြင့် သမိုင်းပေးတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်သင့်ကြပါကြောင်း အကြံပြုတိုက်တွန်း ရေးသားအပ်ပါသည်။
နံနက် ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 9:11 AM0Comment(s) Link This
နိုင်ငံတော်သီချင်းရှင်းတမ်း - တေဇအောင်
မြန်မာ့တေးဂီတသမိုင်းတွင် စွမ်းအင်အထက်မြက်ဆုံးသော တေးတစ်ပုဒ် (သို့မဟုတ်) လူတိုင်းသီဆိုရန် တေးသွားနှင့် သံစဉ်ပါ ခက်ခဲလှသော တေးတစ်ပုဒ်သည် ယနေ့ "နိုင်ငံတော်သီချင်း" ဟု သတ်မှတ်ထားသည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
၁၉၄၁ မှ ၁၉၄၆ ခုနှစ်သို့တိုင်အောင် ကာလအတွင်း ဘီအိုင်အေ၊ ဘီဒီအေ၊ မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော်၊ ဖဆပလအဖွဲ့ကြီး စသည်ဖြင့် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုပုံသဏ္ဌာန်များ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခဲ့ရာ အမျိုးသားဂီတစစ်ကြောင်း အနေဖြင့်လည်း ၁၉၄၆ ခု မတ်လ ၁၆ ရက် ဗဟန်း နေသူရိန်ရုံကြီးတွင် ဆရာကြီး ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၊ ဂီတမိခင်ကြီး ဒေါ်စောမြအေးကြည် တို့ဦးဆောင်ကာ "မြန်မာနိုင်ငံတော် တူရိယာဂီတအဖွဲ့ချုပ်ကြီး" ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ရာ အမှုဆောင်များမှာ-
ဥက္ကဋ္ဌ - ဒေါ်စောမြအေးကြည်
ဒု/ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးမောင်ကလေး (လမ်းမတော်)
အတွင်းရေးမှူး - တက္ကသိုလ်စိုး
ဒု/အတွင်းရေးမှူး - ဒဂုံဆရာတင်၊ ဦးဟန်ဝင်း
၀ါဒဖြန့်နှင့်ပြန်ကြား - ကက်နက်စိန်
ဘဏ္ဍာရေးမှူး - ဒေါ်လှရွှေ (မိုးဒေ၀ါ)
စာရင်းစစ် - ဦးဗစောကြည်
လူမျိုးခြားဖွဲ့စည်းရေး - မစ္စတာဘိန်ဟုတ်
ရပ်ဝေးဖွဲ့စည်းရေး - ဦးလှတင်
အမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းရေး - ဒေါ်ရင်ရင်၊ ဒေါ်မေချစ်၊ ဒေါ်ကြည်ကြည်
အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ - ဦးစိန်းမောင်၊ ဦးဘသန်း၊ စိန်ဝေလျှံ၊ ရွှေတိုင်အေး၊ ရွှေပြည်အေး၊ အေ၀မ်းဦးခင်မောင်၊ ရန်နိုင်စိန် တို့ ဖြစ်ကြသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၀ ရက်တွင်ကျင်းပမည့် တိုင်းပြည်ပြုလွှတ်တော်အမီ နိုင်ငံတော်သီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးသားရန် နိုင်ငံတော်မှ မြန်မာနိုင်ငံတော်တူရိယာ ဂီတအဖွဲ့ချုပ်ကြီးကို တာဝန်ပေးအပ်လာသည်။ ဤကိစ္စကိုဆွေးနွေးရန် ဂီတအဖွဲ့ချုပ် အမှုဆောင်များသည် မြိုင်ဇာတ်ရုံအသင်းတိုက်တွင် ကျင်းပသည်။ အမှုဆောင်နှစ်ဆယ့်တစ်ဦး ရှိသည့်အနက် ခုနစ်ဦးသာ တက်ရောက်သည်။ ပြင်ပ,ပညာရှင် သီချင်းရေးဆရာ ဂီတာသောင်း တက်ရောက်လာ၍ တက်ရောက်လာသူအားလုံး ရှစ်ယောက်ဖြစ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် ဤရှစ်ဦးတို့အား နိုင်ငံတော်သီချင်းရေးရန် တာဝန်ကိုပေးအပ်လိုက်သည်။ သို့သော် အမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဂီတာဦးစိန်းမောင်သည် ထိုနေ့၏ အစည်းအဝေးကို မတက်ရောက်နိုင်သောကြောင့် ခွင့်စာတင်ထားရာ ဆရာရန်နိုင်ဆွေကို အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့သွင်း၍ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်လျှင် နိုင်ငံတော်သီချင်းရေးရမည့်အဖွဲ့သည် ကိုးဦးဖြစ်သွားလေသည်။
ထို့နောက် ဆရာစိန်မြမောင်ကလည်း သူပါဝင်လိုကြောင်း ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြုလာသဖြင့် အဖွဲ့ဝင်ဆယ်ဦးဖြစ်သွားကာ တစ်ဦးလျှင် တစ်ပုဒ်စီရေးကြသောကြောင့် ဆယ်ပုဒ်ဖြစ်လာပါက ရွေးချယ်ရခက်တော့မည်ဟု တွေးမိကာ အုပ်စုသုံးစုခွဲ၍ သုံးပုဒ်ရေးသားတင်ပြရန် ညှိနှိုင်းသဘောတူလိုက်ကြသည်။ သို့နှင့် ဒဂုံဆရာတင်၊ ဆရာရန်နိုင်ဆွေ၊ ဆရာရန်နိုင်စိန်တို့က တစ်ဖွဲ့၊ ဆရာရွှေပြည်အေး၊ တက္ကသိုလ်စိုး၊ ဒေါ်စိန်ပါတီ၏ခင်ပွန်း ဦးဘသက်စသည့် သုံးဦးကတစ်ဖွဲ့၊ ဂီတာသောင်း၊ စောင်းဦးဘသန်း၊ စိန်ဝေလျှံ၊ စိန်မြမောင်တို့ လေးဦးကတစ်ဖွဲ့ စသည်ဖြင့် နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ရေးကြလေသည်။
အချိန်တန်သောအခါ အဖွဲ့သုံးဖွဲ့မှ ရေးသားလာသော နိုင်ငံတော်သီချင်းသုံးပုဒ်ကို တိုင်းပြည်ပြုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြကြသည်။ သို့သော် နားထောင်စိစစ်ပေးရသည့် အဖွဲ့ဝင်လူကြီးများက နားတွင်မတွေ့၊ မည်သို့မျှ နားမစွဲ၍ ဘ၀င်မကျသောကြောင့် သီချင်းရေးသားကြသူ ဆယ်ဦး၏ကိုယ်စား "ဒဂုံဆရာတင်၊ ဆရာရန်နိုင်စိန်၊ မြန်အောင်ဦးတင်၊ ၀န်ကြီး ဗိုလ်ခင်မောင်လေး" စသည့် လေးဦးအဖွဲ့က ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြကာ ၀ိုင်အမ်ဘီသခင်တင် သီဆိုခဲ့သည့် တို့ဗမာသီချင်း "တကောင်းအဘိရာဇာ" အစချီ တတိယအချိုး "အမျိုးသားရေးမို့ ကြိုးပမ်းကြပါ" ဟူသော အပိုဒ်မှ စတင်လျက် သံပြိုင် ကမ္ဘာမကြေအဆုံးထိအောင်သော တေးသွားကိုယူ၍ လွတ်လပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် စာသားများကို ပြောင်းလဲထည့်သွင်းကာ နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ပြုစုခဲ့ကြသည်။
တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ တို့ပြေ တို့မြေ၊ များလူခပ်သိမ်း ငြိမ်းချမ်းစေဖို့၊ ခွင့်တူညီမျှ ၀ါဒဖြူစင်တဲ့ပြေ တို့ပြေ တို့မြေ၊ ပြည်ထောင်စုအမွေ အမြဲတည်တံ့စေ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ ထိန်းသိမ်းစို့လေ xxx
သံပြိုင်။ (ကမ္ဘာမကြေ မြန်မာပြေ တို့ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ)၂ ပြည်ထောင်စုကိုအသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ၊ ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်တဲ့မြေ၊ တို့ပြေ တို့မြေ၊ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တစ်တွေ ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ၊ တို့တာဝန်ပေ အဖိုးတန်မြေ xxx
၁၉၆၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကုန်လောက်တွင် တို့ဗမာသီချင်း (၃၅)နှစ်နှင့် ၀ိုင်အမ်ဘီသခင်တင် အထိမ်းအမှတ်ပွဲကြီးကို ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းရှိ ဂန္ဓီခန်းမကြီးတွင် တို့ဗမာအစည်းအရုံး သမိုင်းပြုစုရေးကော်မတီနှင့် ဂီတအနုပညာရှင်များ ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုပွဲတွင် တို့ဗမာသီချင်းကို မူမှန်စစ်စစ်ဖြင့် သီဆိုပြနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးစားခဲ့ရသည်။ ၀ိုင်အမ်ဘီသခင်တင်ကိုယ်တိုင် ဆိုခဲ့သည့် တို့ဗမာသီချင်းဓာတ်ပြားကိုလည်း ရှာခဲ့ကြရာ မရခဲ့ပေ။
တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင် စိန်စတင်းကို ဆရာစောင်းဦးဘသန်း၊ ဆရာဂီတာဦးစိန်မောင်တို့က တို့ဗမာသီချင်း မူမှန်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး တိုက်ပေးကြသည်။ တို့ဗမာသီချင်းကို စင်ပေါ်တက်ဆိုမည့် (ဦး)ရွှေညာမောင်နှင့် သံပြိုင်အပိုဒ်ကို သီဆိုမည့် စာရေးဆရာမကြီး (ဒေါ်)ကြည်ဦး၊ ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းတို့ကို ဆိုင်းဝိုင်းနှင့် စည်းချည်းတီးပြီး လေ့ကျင့်ပေးကြရသည်။
အခမ်းအနားကြီးစသောအခါ သခင်ဘသောင်းက တို့ဗမာသီချင်းအဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းပြသည်။ ပြီးလျှင် (ဦး)ရွှေညာမောင်က ဆိုတော့သည်။ မျိုးချစ်စာဆိုကြီး ၀ိုင်အမ်ဘီသခင်တင်၏ နိုင်ငံတော်သီချင်းတေးသွားကား ယနေ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ဆိုပါလျှင် အနှစ် (၈၀)တင်းတင်း ရှိခဲ့ပေပြီ။
ဤမျှလောက်ဆိုပါလျှင် နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ဘယ်သူရေးစပ်ခဲ့သလဲဆိုသော (၇)ရက် သတင်းဂျာနယ် ဇန်န၀ါရီ (၇)ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုပါ ဆောင်းပါးရှင်း တက္ကသိုလ်စိုးမိုး သဘောပေါက်သင့်ပြီဟု ထင်ပါသည်။
သမိုင်းဟူသည် လုပ်ကြံ၊ လီဆယ်၊ ဖန်တီး၊ ပြောဆိုရေးသားအပ်သောအရာ မဟုတ်သလို ဖြစ်လေရော့သတည်းဟူ၍ ဥုံဖွမန်းရသည့်အရာလည်း မဟုတ်ပါ။ ဤ "နိုင်ငံတော်သီချင်းရှင်းတမ်း" စာမူကို ဂီတစာဆို ဆရာရန်နိုင်ဆွေ၊ ဂီတစာဆို ဆရာရန်နိုင်စိန်၊ စာရေးဆရာမကြီး (ဒေါ်)ကြည်ဦး၊ စာရေးဆရာကြီး (ဦး)သုခမိန်တို့ ပြောပြချက်များအပေါ်မူတည်၍ သမိုင်းမူမှန်ဖြစ်စေလိုသော စေတနာဖြင့် ရှင်းတမ်းထုတ်လိုက်ရပါပေသည်။
(၂၀-၁-၂၀၁၀ ရက်နေ့ထုတ် News Watch စောင့်ကြည့် ဂျာနယ်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
Posted by Ko Nyan Posted Time 8:58 AM0Comment(s) Link This
Labels ဆောင်းပါး-Article, နိုင်ငံရေး
ကတ်သီးကတ်သတ်တွေ စဉ်းစားနေမိတယ် - ကိုဉာဏ် (ပန်းလောင်မြေ)
ဇာတ်ကားတွေ၊ သီချင်းတွေ၊ ၀တ္ထုတွေ၊ ကဗျာတွေမှာ လွမ်းရဆွေးရတာနဲ့ ပတ်သက်တာမှန်သမျှ ရေးပြီ၊ ပြောပြီ၊ ဖွဲ့စပ်ပြီဆိုတာနဲ့ မပါမဖြစ် စကားလုံးတစ်လုံးက "အထီးကျန်" ဆိုတာပါပဲ။ အထီးကျန်တယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် လူတိုင်းနားလည်ပါတယ်။ အဲဒီစကားလုံးကို ပြောတဲ့သူ၊ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီစကားလုံးနဲ့ အညွှန်းခံရသူဟာ အဖော်မဲ့နေတယ်၊ တစ်ဦးတည်းဖြစ်နေတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်စဉ်းစားနေမိတာက "အထီးကျန်" တယ်ဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ယောက်ျားလေးက ပြောတော့လည်း အထီးကျန်တယ်။ မိန်းကလေးက ပြောတော့လည်း အထီးကျန်တယ်လို့ ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်နေရသလဲ။ ယောက်ျားလေးက အထီးကျန်တယ်လို့ပြောတာ သဘာဝကျတယ်လေ။ မိန်းကလေးက ဘယ်နှယ်ကြောင့် အထီးကျန်ရတာလဲ။ တကယ်ဆိုရင် "အမကျန်"တယ်လို့ မဖြစ်သင့်ဘူးလား။ ကတ်သီးကတ်သတ်စဉ်းစားနေမိတာ ပြောပါတယ်။
ထပ်ပြီးစဉ်းစားမိတာက အဖော်မဲ့နေ၊ တစ်ဦးတည်းဖြစ်နေလို့ လွမ်းဆွေးခံစားရတာကို အထီးကျန်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ဘာကြောင့်များ သတ်မှတ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာပါ။ ဆိုပါတော့ဗျာ… ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ ခွဲခွါရတဲ့အခါမျိုးမှာ ယောက်ျားလေးတွေက ပိုမိုခံစားရတတ်လို့လား (သဘောကတော့ ယောက်ျားလေးတွေက အသည်းပိုနုပြီး ပိုခံစားလွယ်လို့လား)၊ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီစကားလုံးကို တီထွင်ခဲ့တဲ့လူဟာ ယောက်ျားလေးဖြစ်နေလို့လား ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ခင်ဗျားရော.. ဘယ်လိုထင်သလဲဗျ။ တကယ့်ကို ကတ်သီးကတ်သီးကြီးပါဗျာ၊ နော်…။
နောက်တစ်ခုလာပြန်ပြီ။ "ချေး" ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ။ "ချေး" ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို မြန်မာအဘိဓာန်မှာ သုံးမျိုးပြထားသဗျ။ ပထမတစ်မျိုးက အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း မစင်၊ ကျင်ကြီး၊ အညစ်အကြေး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ လူတွေမပြောချင်၊ မကြားချင်ကြတဲ့ စကားလုံးပေါ့။ ရယ်တော့ရယ်စရာကြီးနော်၊ ဘယ်နှယ့်ဗျာ… နေ့တိုင်း ဒီကိစ္စနဲ့ ကင်းလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့။ ထားပါတော့။ နောက်အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးကတော့ သူတစ်ပါးဆီကနေ ငွေကြေး စတာမျိုးကို ခေတ္တယူတာ၊ ဒါမှမဟုတ် သူတစ်ပါးကို ကိုယ်ကနေ ခေတ္တပေးတာမျိုးပါ။ နောက်ဆုံးတတိယတစ်မျိုးကတော့ အပင်တစ်မျိုးရဲ့အမည်ပါတဲ့။ အဲဒီသစ်ပင်က အပင်ကနေ သစ်စေးထွက်ပြီး အသီးကနေ မင်စေးထွက်သတဲ့ဗျ။ ချေးပင်ပေါ့နော်။
ကျွန်တော်တွေးမိတာက ဒီလိုဗျ။ ချေးဆိုတာရဲ့ မူရင်းအဓိပ္ပါယ်ဟာ အညစ်အကြေး၊ မစင်ပေါ့ဗျာ။ လူတွေမလိုချင်တဲ့၊ လူတွေရွံတဲ့၊ မနှစ်မြို့တဲ့ အရာပေါ့ဗျာ။ အဲဒါဆိုရင် ပိုက်ဆံချေးတာတို့၊ ပစ္စည်းချေးတာတို့မှာ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီ"ချေး" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးရတာလဲ။ ချေးငှားတာဟာ မကောင်းဘူးဆိုတာကို ပြောချင်တာလား။ ပိုက်ဆံချေးတာ၊ ပစ္စည်းချေးတာကို မစင်လိုပဲရွံရှာစေချင်တာလား။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ အတော်ခေတ်မီတယ်လို့ ဆိုရမယ်ဗျ။ ဟုတ်တယ်လေ။ အကြွေးဆိုတာမျိုးက ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဘာကြွေးပဲဖြစ်ဖြစ် မတင်တာအကောင်းဆုံးမဟုတ်လား။ ပိုက်ဆံကြွေး၊ ပစ္စည်းကြွေး၊ ကျေးဇူးကြွေး၊ နောက်ဆုံး သံသရာကြွေးတွေ ကင်းစင်နေတာဟာ အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒါကြောင့် ချေးငှားတာတွေကို ချေးဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ သုံးထားတာလို့ တွေးကြည့်မိတော့လည်း အဲဒီစကားလုံးကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ ရှေးတုန်းက မြန်မာပညာရှိကြီးတွေကို ချီးကျူးမိပြန်ပါရော။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကလည်း ကတ်သီးကတ်သတ်မှ တကယ့်ကို ကတ်သီးကတ်သက်ပါပဲ။ ဒီလိုလေးလည်း စဉ်းစားမိသေးသဗျ။ "ချေး" ဆိုတာမျိုးကို လူတွေမနှစ်သက်၊ မမြတ်နိုးကြပေမယ့် နေ့စဉ်တော့ မလုပ်မဖြစ် လုပ်နေကြရတယ်။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂရုစိုက်ကြရတယ်လေ။ အဲဒီတော့ အကြွေးဆိုတာမျိုးကိုလည်း မနှစ်မြို့ပေမယ့် မလုပ်မဖြစ်တော့ လုပ်နေရဦးမယ်လို့လေ။
ကျွန်တော်တို့တွေ့ရင် ပြုံးမပြမိပါစေနဲ့ဗျာ။ ခင်ဗျားဆီက တစ်ခုခုချေးမိမှာစိုးလို့ပါ။ မကောင်းတာသိပေမယ့် နေသာထိုင်သာရှိအောင်တော့ မလုပ်မဖြစ်လုပ်နေဖို့ လိုတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့်ပါ။
ဒီတစ်ခါစဉ်းစားမိတဲ့ စကားလုံးက "ယောက်မ" ပါ။ ကျွန်တော်နဲ့ကြုံတဲ့လူတိုင်းကို ပြောပြဖြစ်၊ ပြင်ပေးဖြစ်ပေမယ့် မထူးပါဘူး။ အချိန်တန်တော့ သူတို့ထင်သလိုပဲ "ယောင်းမ" ကြတာပါပဲ။ "ယောက်ဖ" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လူတိုင်းမှန်အောင် သုံးတတ်တယ်။ ဘာကိစ္စများ "ယောက်မ" ကျမှ လာမှားနေကြသလဲဆိုတာကို စဉ်းစားလို့မရဘူး။ ရှင်းနေတာပဲလေ။ ယောက်ျားလေးကို ခေါ်ချင်ရင် "ယောက်ဖ"၊ မိန်းကလေးဆိုမှတော့ "ယောက်မ" ပေါ့။ ဟုတ်ဖူးလား။ အဲဒါကိုဗျာ… ဘယ်လောက်ပြင်ပေးပြင်ပေး မရပါဘူး။ ရေးလာလိုက်ရင် "ယောင်းမ" ချည်းပဲ။ ထားပါတော့၊ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာက အဲဒီစကားလုံးမှားတာကို မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလိုဗျ။ "ယောက်မ" ဆိုတဲ့စကားလုံးအဓိပ္ပါယ်က အစ်ကို ဒါမှမဟုတ် မောင်ရဲ့ မယား။ နောက် လင်ရဲ့အစ်မ ဒါမှမဟုတ် နှမပေါ့။ အဲဒီအထိ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ပြဿနာက အဲဒီစကားလုံး "ယောက်မ" မှာ နောက်ထပ်အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုး ရှိသေးသဗျ။ အားလုံးလည်း သိပြီးသားပါ။ ထမင်းတွေ၊ ဟင်းတွေချက်တဲ့အခါမှာ သုံးတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုလည်း "ယောက်မ" လို့ ခေါ်တယ်လေ။ မြို့ကလူတွေအတွက်ကတော့ ဇွန်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သာ ရင်းနှီးနေနိုင်ပေမယ့် အများစုကတော့ "ယောက်မ" ကို ကောင်းကောင်းသိမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့များ စောစောက လူကိုခေါ်တဲ့ "ယောက်မ" နဲ့ မီးဖိုချောင်မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်း "ယောက်မ" က လာတူနေရသလဲလို့ပေါ့။ မီးဖိုချောင်သုံး "ယောက်မ"ကတော့ မွှေတဲ့နေရာမှာ အင်မတန်အသုံးဝင်သဗျ။ ဒါဆိုရင် လူ"ယောက်မ" ကရော လင်မယားတွေကြား၊ မိသားစုတွေကြားမှာ ၀င်မွှေနေတာကို ဆိုလိုတာများလား။ မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ၊ နော်။ နောက်တစ်ခါရှိသေးတယ်။ "ယောက်မသည် ထမင်း၊ ဟင်းအိုးတို့ကို ဘယ်လောက်ပဲ မွှေနေရပါစေ၊ အရသာကိုမသိ" တဲ့။ ဟင်… အဲဒါဆိုရင် လူ"ယောက်မ"ကရော ဘာအရသာကို မသိတာလည်း မသိဘူး။ တော်ပါပြီဗျာ။ မစဉ်းစားတော့ပါဘူး။ တကယ့်ကို ကတ်သီးကတ်သတ်ကြီးပါ။
မြန်မာစာပေ၊ မြန်မာစကားလုံးများနှင့် ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုရေးဖို့လည်း ကျွန်တော်ဟာ ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက် လုံးဝ(လုံးဝ)ကို မဟုတ်ရပါဘူး။ မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ရင် က,ကနေ အ,အထိ မမှားအောင် အလွတ်ရွတ်နိုင်၊ အလွတ်ရေးနိုင်တာပဲ ရှိပါတယ်။ စကားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်တာဟာ ပညာရှင်တွေရဲ့အရာဆိုတာလည်း သိပါရဲ့။ အခုရေးမိတာက ကျွန်တော့်ဘာသာ ကတ်သီးကတ်သတ် စဉ်းစားမိတာလေးတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှတဲ့ သဘောသက်သက်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၇ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။
နေ့လည် ၂ နာရီ ၂၉ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 3:09 PM0Comment(s) Link This
၁၀။ မင်းတုန်းမင်း (၁၂၁၄-၁၂၄၀)
မင်းတုန်းမင်းသားသည် အရေးတော်အောင်မြင်၍ ထီးနန်းသိမ်းပိုက်လေသည်။ ညီတော် ကနောင်မင်းသားအားလည်း လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်နှင့် စုံဖက်၍ အိမ်ရှေ့အရာ ပေးလေသည်။ အင်္ဂလိပ်တို့လည်း စစ်ပြေငြိမ်းစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် စေလွှတ်လေသည်။ သို့ရာတွင် မင်းတုန်းမင်းက မိမိနှင့်ဖြစ်သော စစ်မဟုတ်၍ လက်မှတ်မထိုးချေ။ အင်္ဂလိပ်တို့လည်း ရခိုင်ဘိုးခေါင်တောင်ထိပ်မှ မြေထဲ (အောင်လံမြို့) မြောက်ဘက် ၆ မိုင်ကွာ နယ်ခြားအဖြောင့်အတိုင်း တောင်ဘက်တလွှားကို သိမ်းယူလေသည်။ ၁၂၁၅ ခုနှစ်တွင် ယိုးဒယားက ကျိုင်းတုံကို ထိပါးလာသဖြင့် တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းရလေသည်။ မြန်မာတို့က ပဲခူးနယ်ကို ပြန်ပေးရန် အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ်အထိ သွားရောက်အရေးဆိုသော်လည်း နယ်ချဲ့လို၍ ရန်စစ်ပြုသော အင်္ဂလိပ်တို့က ပြန်၍ မပေးအပ်ချေ။
မင်းတုန်းမင်းသည် ၁၂၁၇ ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ သံစေလွှတ်လေသည်။ ၁၂၁၈ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးတောင်ခြေ၌ ရတနာပုံမြို့သစ်ကို တည်ထောင်လေသည်။ အင်္ဂလိပ်တို့နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး စာချုပ်တစ်ရပ်ချုပ်ဆိုကာ နေပြည်တော်တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ကို လက်ခံခွင့်ပြုလေသည်။ မင်းတုန်းမင်းတွင် မိဖုရား၊ သားတော်၊ သမီးတော်များ များပြားလှသောကြောင့် နန်းတွင်းရေးပြဿနာများလည်း ရှုပ်ထွေးလေသည်။ ၁၂၂၈ ခုနှစ်တွင် သားတော် မြင်းကွန်းစားနှင့် မြင်းခုံတိုင်စားတို့သည် အိမ်ရှေ့မင်း ကနောင်မင်းသားအား လုပ်ကြံ၍ နန်းတော်ကို စီးနင်းလေသည်။ သို့ရာတွင် အရေးမလှ၍ ရေနန်းစကြာ သင်္ဘောတော်ကို အတင်းယူဆောင်၍ အင်္ဂလိပ်ပိုင်နက်သို့ စုန်ပြေးလေသည်။ ကနောင်မင်းသားမှာ နိုင်ငံထူထောင်ရေးအတွက် အနောက်နိုင်ငံများကို ပညာတော်သင်များစေလွှတ်ကာ လက်နက်စက်ရုံမှအစ စက်ရုံများစွာကို တည်ထောင်လေသည်။ လက်နက်များပြုလုပ်ရာ ရေမြှုပ်ဗုံးအထိ အောင်မြင်သော်လည်း မင်းတုန်းမင်းကြီးက တားမြစ်သဖြင့် မပြုလုပ်ရတော့ဘဲ ရှိခဲ့လေသည်။ ကနောင်မင်း ကွယ်လွန်ရသဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွက် တအားဆုတ်ယုတ်ကြလေသည်။
မြင်းကွန်းမြင်းခုံတိုင်အရေး ပြီးသည့်နောက်တွင် ပန်းတိမ်းမင်းသားက ပုန်ကန်ထကြွပြန်လေသည်။ ကသာမင်းသားလည်း ထကြွလေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် ကနောင်မင်း ကွယ်လွန်သည့်နောက်တွင် သားတော်များ စိတ်ဝမ်းကွဲမည်စိုးသဖြင့် မည်သူ့ကိုမျှ အိမ်ရှေ့အရာမပေးဘဲနေလေရာ မင်းသားတို့လည်း အသီးသီးကြိတ်၍ ကြိုးစားကြံစည်နေကြလေသည်။ ၁၂၄၀ ပြည့်နှစ်တွင် မင်းတုန်းမင်းကြီးသည် မကျန်းမမာရှိလေရာ နန်းလျာရွေးချယ်ရေးမှာ ပြဿနာဖြစ်၍လာလေသည်။ မင်းတုန်းမင်းကြီးသည် သားတော်ကြီးများဖြစ်သော သုံးဆယ်မင်းသား၊ မက္ခရာမင်းသား၊ ညောင်ရမ်းမင်းသားတို့ ထီးနန်းစံလျှင် စိတ်ခက်ထန်သည့်အတိုင်း အင်္ဂလိပ်နှင့် အရေးအခင်းဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ပထမပြန် စာပြန်ပွဲ (၃)ကြိမ် ဖြေဆိုခဲ့သော သားတော် သီပေါမင်းသားကို ရွေးချယ်လိုလေသည်။ သီပေါမင်းမှာ စိတ်ထားနူးညံ့၍ မိမိ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း လိုက်နာဖွယ်ရှိပေသည်။ ထိုမှတစ်ပါး အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ခဲ့ဖူးသော ကင်းဝန်မင်းကြီးကလည်း အင်္ဂလိပ်စစ်အင်အားကို ခံ့ညားသဖြင့် အင်္ဂလိပ်နှင့် စစ်ဖြစ်ရေးကို စိုးရွံ့၍ မိမိ သြဇာညောင်းနိုင်မည့် မင်းလျာမျိုးကို အလိုရှိသည့်အတိုင်း သီပေါမင်းသားကို သဘောကြိုက်ညီလေသည်။ ဆင်ဖြူမရှင် မိဖုရားကြီးကလည်း မိမိသမီးတော် စုဖုရားလတ်နှင့် ရည်ငံနေသော မင်းသားဖြစ်၍ သမီးတော် မိဖုရားကြီးဖြစ်ရေးကို ရည်မျှော်၍ သီပေါမင်းသားအား နန်းလျာထားသည်ကို ကျေနပ်လေသည်။
ဤသို့အားဖြင့် မင်းတုန်းမင်းကြီး ရောဂါမှသက်သာချိန်တွင် သီပေါမင်းသားအား အိမ်ရှေ့အရာထားကြောင်း ကြေညာလေသည်။ ထို့နောက် မင်းတရားကြီး မကျန်းမာစဉ် မင်းကြီးမသိစေဘဲ မှူးမတ်အချို့နှင့် မိဖုရားကြီး၏ အစီအမံဖြင့် သီပေါမင်းသားအား အနှောင့်အယှက် မပေးနိုင်ရန် မင်းညီမင်းသား လေးဆယ်ကျော်ကို မင်းတရားကြီး ခေါ်ယူဟန်နှင့် လီဆယ်ကာ အကျယ်ချုပ် ဖမ်းဆီးထားလေသည်။ ညောင်ရမ်းမင်းသား၊ ညောင်အုပ်မင်းသားတို့ကား ရိပ်မိ၍ အင်္ဂလိပ်သံအရာရှိအိမ်တွင် ပုန်းခိုပြီးနောက် အောက်မြန်မာနိုင်ငံသို့ စုန်ပြေးလေသည်။
မင်းတုန်းမင်းကြီးကား ၁၂၄၀ ပြည့်နှစ် သီတင်းကျွတ်လတွင် နတ်ရွာစံလေတော့သည်။ မင်းတုန်းမင်းကြီးသည် မှန်နန်းရာဇ၀င်တော်ကို ဆက်လက်ရေးသားစေခြင်း၊ ပိဋကတ်တော်များကို ကျောက်ထက်အက္ခရာတင်၍ ပဉ္စမ သံဂါယနာတင်ခြင်း၊ သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့်ပြုခြင်း၊ အနောက်နိုင်ငံများသို့ သံစေလွှတ်ခြင်း၊ မှုထမ်းတို့အား လစာရိက္ခာချီးမြှင့်ခြင်း၊ ငွေဒင်္ဂါးသွန်းလုပ်ခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်မှုကို အားပေးခြင်း၊ သူနာပြုဆေးရုံ၊ သူအိုရုံ စသည်တို့ကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း စသည်ဖြင့် ပြည်သူ့အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့လေသည်။
Posted by Ko Nyan Posted Time 3:08 PM 1 Comment(s) Link This
ကျန်းမာသောနှစ်သစ် ၂၀၁၀ အတွက် စားသုံးသူအခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ပညာရှင်များ တားမြစ်ထားသော အစားအသောက် ခုနစ်မျိုး - ဆက်ပိုင်လင်းခန့် (ဆေး-၂)
ကောင်းသောနှစ်သစ် ၂၀၁၀ မှာ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေဖို့ အောက်ပါအစားအသောက် ခုနစ်မျိုးကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်သင့်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်များက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
(၁) ခရမ်းချဉ်သီး စည်သွတ်ဘူးများ (ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်များ ပါဝင်သည်)
စည်သွတ်ဘူးတွေ ထုတ်ပိုးရာမှာ Bisphenol-A (ဘစ်ဖီနော-အေ) လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းကို သံဖြူဘူးတွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားမှာ သုတ်လိမ်းအသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီဓာတုဒြပ်ပေါင်းဟာ မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုနဲ့ အ၀လွန်ရောဂါတွေကို ဖြစ်စေတယ်လို့ ဆေးပညာရှင်တွေ အတည်ပြုပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစည်သွတ်ဘူးတွေထဲမှာမှ ခရမ်းချဉ်သီးတွေရဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဘစ်ဖီနော-ဘေ ပိုမိုရောက်ရှိစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း - သံဖြူစည်သွတ်ဘူး မဟုတ်တဲ့ ဖန်ပုလင်းတွေနဲ့လာတာတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။
(၂) ပြောင်းဖူးအဆန်ကျွေး၍ မွေးမြူထားရာမှ ရရှိသော အမဲသား
နွားဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါမျိုးတွေဟာ အရွက်စားတဲ့သဘာဝပဲရှိပြီး အဆန်တွေစားတဲ့ သဘာဝမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယနေ့ခေတ် နွားမွေးမြူသူတွေက နွားတွေကို ကြီးထွားမှုမြန်ဆန်လာအောင် ပြောင်းဖူး၊ ပဲပိစပ် စတဲ့သီးနှံတွေ ကျွေးလာကြပါတယ်။ အရွက်စားတဲ့ နွားတွေရဲ့အသားမှာ အနှံစားတဲ့နွားတွေရဲ့ အသားထက် ဘီတာကယ်ရိုတင်း (ဗီတာမင်အေ)၊ ဗီတာမင်အီး၊ အိုမီဂါသရီးအဆီများ၊ CLA လို့ခေါ်တဲ့ အကျိုးပြုအဆီများနဲ့ ကယ်လစီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ် စတဲ့ သတ္ထုဓာတ်များ ပေါများစွာ ပါဝင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အနှံစားတဲ့ နွားတွေမှာတော့ ဒါတွေနည်းပါးပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မကောင်းတဲ့ပြည့်ဝဆီ (Saturated Fats) များ သာမန်ထက် ပိုမိုများပြားစွာ ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း - စူပါမားကတ်တွေမှာရောင်းတဲ့ အမဲသားတွေမှာ အဆိုပါ နွားနှစ်မျိုးရဲ့ အသားတွေကို ခွဲခြားတံဆိပ်ကပ်ပြီး ရောင်းချကြပါတယ်။ မတွေ့ရင် ဆိုင်တာဝန်ခံများကို မေးနိုင်ပါတယ်။
(၃) မိုက္ကရိုဝေ့ဖ်နည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပေါက်ပေါက်
Perfluoro Octanoic Acid (PFOA) လို့ ခေါ်တဲ့ ဓာတုဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဟာ ပလတ်စတစ်အိတ်တွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ မိုက္ကရိုဝေ့ဖ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပေါက်ပေါက်တွေကို ပလတ်စတစ်အိတ်တွေထဲ ထည့်လိုက်ရင် တခြားစားစရာတွေထက်ပိုပြီး PFOA တွေကို အငွေ့ပျံစေပြီး စုပ်ယူမှုပိုကောင်းကာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ပိုမိုရောက်ရှိစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းရဲ့ ဆိုးကျိုးကတော့ သားသမီးရရှိရေးကို နှောင့်ယှက်တယ်လို့ စမ်းသပ်တွေ့ရှိထားပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း - ဖြစ်နိုင်ရန် ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲ ပေါက်ပေါက်တွေကို ကြာကြာထည့်မထားပါနဲ့။ ဒါမှမဟုတ် တခြားထည့်စရာ တစ်ခုခု ပြောင်းထည့်ပြီးစားပါ။
(၄) အော်ဂဲနစ်သီးနှံမဟုတ်သော အာလူး
အော်ဂဲနစ်နည်းနဲ့ မဟုတ်တဲ့ အာလူးတွေဟာ ကြီးထွားချိန်မှာ မှိုသတ်ဆေး ဖျန်းရလေ့ရှိပြီး အာလူးပေါ်ချိန်နီးရင်လည်း ပေါင်းသတ်ဆေးဖျန်းရပြန်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အော်ဂဲနစ်မဟုတ်တဲ့ အာလူးတွေက တခြားသီးနှံတွေထက် စုပ်ယူထားကြလို့ တတ်နိုင်သမျှ လျှော့စားသင့်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း - တတ်နိုင်ရန် အော်ဂဲနစ်အာလူးတွေကိုပဲ ရွေးချယ်ဝယ်ယူစားသုံးပါ သို့မဟုတ် ရေထဲမှာစိမ်ထားပြီး အနည်းဆုံး ငါးခါလောက် အချိန်ကြာကြာ ဆေးသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆယ်လမွန်ငါးတွေရဲ့ သဘာဝအရ ပင်လယ်မှာ မကြီးပြင်းရဘဲ ဒီလိုမွေးမြူရေးအနေနဲ့ မွေးထားရင် ကြက်၊ ငှက်တွေရဲ့ အညစ်အကြေး၊ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်သတ္ထုတွေ၊ ပိုးသတ်ဆေးတွေကို အလိုအလျောက် စုပ်ယူမိစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ဗီတာမင်ဒီ ပါဝင်မှုပမာဏကိုလည်း လျော့နည်းစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း - Alaska Salmon လို့ တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့ ငါးတွေကတော့ အကောင်းဆုံး သဘာဝငါးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Fresh Atlantic လို့ ကပ်ထားရင်တော့ လုံးဝ မ၀ယ်ပါနဲ့။ ဒါဟာ မွေးမြူရေးငါးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတ္တလန္တိတ်ရေပြင်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဆယ်လမွန်ငါးဖမ်းခွင့် မပေးထားလို့ပါ။
(၆) ဟော်မုန်းများထိုး၍ ထုတ်လုပ်ထားသော နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်း
နို့ထုတ်လုပ်သူများဟာ မျိုးရိုးဗီဇနည်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားသော နွားကြီးထွားရေးဟော်မုန်း (recombinant Bovine Growth Hormone, rBGH) ကိုသုံးပြီး သူတို့ရဲ့ နို့စားနွားတွေကို နို့ပိုထွက်အောင် လုပ်ပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ နွားဆီက ရောဂါပိုးများနဲ့ "ပြည်"များ နွားနို့ထဲမှာ ပါလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေရှည်သောက်သုံးသွားရင် ဆီးကျိတ်၊ ရင်သားနဲ့ အူမကြီးကင်ဆာများပါ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း - နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင် rBGH-free, rBST-free ဆိုတဲ့ လေဘယ်များပါတာတွေကို ရှာဝယ်ရင် စိတ်ချရပါတယ်။
(၇) အော်ဂဲနစ်သီးနှံမဟုတ်သော ပန်းသီး
အသီးအနှံများရဲ့ ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ ထိတွေ့မှုအများဆုံးပြိုင်ပွဲသာလုပ်ရင် ပန်းသီး ပထမရမှာ သေချာပါတယ်။ သာမန်ပန်းသီးတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကိုင်းကူးကိုင်းဆက်နည်းနဲ့ စိုက်ထားတဲ့ ပန်းသီးတွေဟာ ရောဂါပိုးမွှားဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်နည်းလွန်းလို့ ခဏခဏ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းရလွန်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုးသတ်ဆေးတွေဟာ ကင်ဆာအမျိုးမျိုးနဲ့ ပါကင်ဆန်ရောဂါလို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်ထိခိုက်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်လို့ ကြောက်စရာပါပဲ။
ဖြေရှင်းနည်း - နံပါတ်(၄)က အာလူးနဲ့ အတူတူပါပဲ။
(The Voice Weekly ဂျာနယ် အတွဲ ၆ အမှတ် ၁၂ မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
Posted by Ko Nyan Posted Time 3:04 PM0Comment(s) Link This
ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်သာသိတဲ့ ဂျာနယ်လစ်ကျွန်တော် - လူထုစိန်ဝင်း
နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်အစိတ်လောက် ကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့သူဖြစ်တော့ ပညာကို အင်မတန်မှကို တန်ဖိုးထားပါတယ်။ ပညာရပ်နယ်ပယ် တစ်ခုခုမှာ ထူးချွန်သူ ပညာရှင်များကိုလည်း အလွန်လေးစားပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အသက် ၇၀ တန်း ရောက်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် ကွန်ပျူတာရှေ့ချပြီး သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ပညာမှန်သမျှ ရှာဖွေလေ့လာ ဆည်းပူးနေဆဲ ဖြစ်တယ်။
ပညာရပ်တွေနောက်လိုက်ပြီး လေ့လာရင်း လေ့လာရင်းက ကွန်ပျူတာနဲ့ မျက်စိမခွါနိုင်အောင်အထိ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ ပညာဆိုတာ ဘာပညာမဆို လေ့လာလို့ဆုံးတယ်ဆိုတာ မရှိပါလားလို့ တွေးရင်းနဲ့ မနည်းရပ်ပစ်ရတယ်။ မျက်စိက စကားပြောလာတယ်။ ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်က စာတွေ မဖတ်နိုင်တော့ ကြာကြာဖတ်နိုင်တဲ့ ပုံနှိပ်စာအုပ်တွေထဲက စာတွေဖတ်ပြီး လေ့လာရတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော စာအုပ်လောက်ကောင်းတာတော့ မရှိသေးပါဘူး။ မီးမလာလည်း ခေတ်ပေါ် LED မီးအိမ်တွေနဲ့ ဖတ်လို့ရတယ်။ ခါးညောင်းလာရင် အိပ်ရာထဲ လှဲရင်းဖတ်နိုင်တယ်။ ဖတ်လိုက် လေ့လာလိုက် လုပ်ရင်းနဲ့ ပညာရပ်တွေနဲ့ ပညာရှင်တွေကို တန်ဖိုးထားသထက် ပိုထားလာခဲ့ရတယ်။ ပညာရှင် စစ်စစ်တွေရဲ့ စရိုက်များကိုလည်း ပိုပြီး သိနားလည်လာခဲ့ရတယ်။ ပညာရှင်ဆိုတာ "လူပြောမသန် လူသန်မပြော" ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ပါးစပ်က ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ ပြောလေ့မရှိဘဲ သူ့အလုပ်ကိုသာသူ ကိုယ်ရောစိတ်ပါနှစ်ပြီး လုပ်နေသူပါလားလို့ နားလည်သွားတယ်။ ဘယ်ပညာရှင်မှ သူ့ကိုယ်သူ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပညာရှင်ဖြစ်ပြီ ဆက်လေ့လာစရာကုန်ပြီ သူများကို ဆရာလုပ်လို့ရပြီလို့ သဘောမထားကြတာကိုလည်း သိရှိခဲ့ရတယ်။
ဆိုကရေးတီး၊ အာခေမီးဒီးစ်၊ ကော့ပါးနီးကပ်၊ ဒါဝင်၊ အိုင်းစတိုင်း၊ ကားလမတ်၊ အိန်ဂျယ်၊ မော်စီတုံး၊ ဘာထရန်ရပ်ဆယ် အစရှိတဲ့ ပညာရှင်ကြီးများအကြောင်းတွေ လေ့လာဖတ်ရှုလေလေ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပြီး ကြည်ညိုလေးစားလာလေလေ ဖြစ်တာနဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ စာမျိုးစုံ ဖတ်ရှုလေ့လာရင်းနဲ့ တွေ့ရှိလာရတဲ့ အတုအယောင် ပညာရှင်ဆိုတာတွေကိုလည်း တော်တော်မျက်စိနောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ပညာရပ်နယ်ပယ်မှာလည်း မဟာဘုတ်တိုင် ထူတတ်ရုံနဲ့ ဗေဒင်ဆရာလုပ်သူ၊ လျက်ဆားတစ်ဖုံဖော်တတ်ရုံနဲ့ ဆေးဆရာလုပ်သူတွေကို ဘာသာရပ်တစ်ခုလောက် "ခရီးသွားလမ်းကြုံ" လေ့လာဖူးရုံလောက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆရာကြီးတစ်ဆူလောက်ထင်ပြီး မသိမတတ် နားမလည်သူတွေကို ဆရာလုပ် ၀င့်ပါနေတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ သနားစရာလည်း,ကောင်း၊ ရယ်စရာလည်း,ကောင်းတဲ့ လူစားမျိုးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လူများစုကြီးက ၀ိုင်းဟားနေတယ် ဆိုတာကိုတောင် မသိနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေရှာကြတယ်။
ဒီလူမျိုးတွေဟာ အများအားဖြင့် ဘွဲ့လေး တစ်ခုတစ်လေ ရရုံလောက်၊ စာလေးပေလေး တတ်ထားတဲ့ မြို့ကြီးသား လူလည်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဘယ်ခေတ်ရောက်ရောက် အာဏာပါဝါ လက်ကိုင်ရှိသူတွေကို မျက်နှာချိုသွေးပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာတတ်တယ်။ ကိုယ့်ကို စောင့်မကြည့်ရှုနေသူ အာဏာပါဝါ လက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ ကျောခိုင်းပစ်လိုက်ပြီး သခင်သစ်ဆီ ပြေးကပ်တော့တယ်။ စာလေးဘာလေး တတ်ထားပြီး လူရည်လည်သူဆိုတော့ ချိန်ခွင်လျှာ ဘယ်ဘက်ထွက်တယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒါကြောင့် ခေတ်တွေ ဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း အဲဒီလူစားမျိုးတွေက အပေါ်ဆုံးလွှာမှာချည်း ဝေ့လည် ဝေ့လည်နဲ့ တွယ်ကပ်နေနိုင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ရေပေါ်ဆီလူတန်းစားတွေလို့ ဒီလူမျိုးတွေကို ခေါ်ကြတယ်။ လူအထင်ကြီးအောင် ပြောရရင်တော့ "အီလစ်" (elite) တွေပေါ့။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို "ပစ်တိုင်းထောင်ရုပ် ကြိုးရှုပ်" သလိုဖြစ်အောင် လုပ်နေသူများဟာ အဲဒီလို ကိုယ့်ဟာကိုယ် မဟာပညာကျော်တံဆိပ် ရင်ဘတ်တပ်ထားတဲ့ "အီလစ်" တွေပဲ ဖြစ်တယ်။ အီရတ်စစ်ဆင်ရေး ဗျူဟာတွေ ရေးဆွဲခဲ့ကြသူတွေဟာ ကောလင်းပါဝဲလို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ မဟုတ်ဘူး။ ဒုသမ္မတ ဒစ်ချင်နီလို၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ၀ိုင်းဘာဂါလို "အီလစ်" တွေဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာ "ခွက်ခွက်လန်" အောင် ရှုံးခဲ့သလို အီရတ်ကလည်း ဆုတ်ခွါထွက်ပြေးခဲ့ရတာပဲ မဟုတ်လား။ အခု အာဖဂန် စစ်ပွဲမှာလည်း အိမ်ဖြူတော်က ငှားထားတဲ့ ကာကွယ်ရေးစနစ်ပါရဂူတို့၊ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ စပယ်ရှယ်ကျွမ်းကျင်သူတို့ဆိုတဲ့ "အီလစ်" တွေက ဗျူဟာတွေ ရေးဆွဲချမှတ်ပေးနေကြတာပါပဲ။ လက်တွေ့အားဖြင့်တော့ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလည်း ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတုန်းကအတိုင်း စစ်တပ်အင်အားတွေ ထပ်တိုးလို့ကို မပြီးနိုင်တော့ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ထပ်ပို့ပို့ နောက်ဆုံးမှာ အီရတ်က ဆုတ်ခွါပြေးရသလို၊ ဗီယက်နမ်က "ဒရောသောပါး" ထွက်ပြေးခဲ့ရသလို၊ အာဖဂန်နစ္စတန်ကလည်း ဆုတ်ခွါပြေးရမှာပါပဲ။
"အီလစ်" နဲ့ ပညာရှင် စစ်စစ်ဆိုတာ မတူပါဘူး။ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းလောက်ကို ကွာခြားပါတယ်။ ပညာရှင်စစ်စစ်ဆိုတာ ဆိုကရေးတီးတို့၊ ကော်ပါးနီးကပ်တို့လို ကိုယ့်ပညာရပ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် "ဆတ်ဆတ်ထိ" ခံတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ပညာရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကို အသက်နဲ့လဲပြီးတောင် ကာကွယ်ကြတာဖြစ်တယ်။ "အီလစ်" တွေကတော့ ရာထူးနဲ့ ပိုက်ဆံကလွဲပြီး ဘာမှကြည့်တာ မဟုတ်ဘူး။ ရာထူးနဲ့ ပိုက်ဆံရှိရင် ဂုဏ်ရှိတာပဲလို့ ယူဆသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ သိက္ခာတို့ အရှက်တို့ဆိုတာကို နားလည်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ရာထူးနဲ့ ပိုက်ဆံရဖို့ ဘာမဆို လုပ်ရဲကြတယ်။ "ကြောင်ဖြူတာ မည်းတာ အရေးမကြီးဘူး။ ကြွက်မိဖို့သာ လိုရင်းပဲ" ဆိုတဲ့ အဘိဓမ္မာကို ကြွေးကြော်ကြတာ အဲဒီလို "အီလစ်" တွေပေါ့။
ခေတ်လူငယ်တွေကို ပညာတန်ဖိုးထားသူတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ပညာရှင်များကို လေးစားရိုကျိုးစေချင်တယ်။ ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ ပြောသံတွေကြားတိုင်း "ရောယောင် နောက်လိုက်" မဖြစ်ကြစေချင်ဘူး။ ပညာရှင်ဆိုတာ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်နဲ့ Something of everything သိသူမျိုးကို ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလို နေရာတကာ နည်းနည်းစီ သိထားရတာက ကျွန်တော်တို့လို ဂျာနယ်လစ်မျိုးကို ပြောတာ။ ဂျာနယ်လစ်က ပညာရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ ပညာရှင်စစ်စစ်ဆိုတာက ပညာရပ်တစ်ခုတည်းကို အသေးစိတ်နှံ့နှံ့စပ်စပ် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် တတ်သိနားလည်သူ ဖြစ်တယ်။ Everything of Something ကိုသိသူ ဖြစ်တယ်။ လူတွေကို ဆိုကရေးတီးတို့၊ ကော့ပါးနီးကပ်တို့လို ပညာရှင်မျိုးကို အားကျအတုယူစေချင်တယ်။ တတ်ယောင်ကားသမား အီလစ်တွေရဲ့ လူတွင်ကျယ် လုပ်ပုံတွေကို အတုမယူစေချင်ဘူး။ လူငယ်တွေက အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်မှာ ဖြစ်လို့ပဲ။
(True News ဂျာနယ် အတွဲ ၂ အမှတ် ၂၄ မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
Posted by Ko Nyan Posted Time 3:01 PM0Comment(s) Link This
ISO လက်မှတ်ရဆိုတာက ISO Specification နဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းကိုသာ ဆိုတယ်။ ISO ရဲ့ Standard တွေက အများကြီးပါပဲ။ ISO 9001 တို့ ဘာတို့ဆိုတာက ဒီ Product တွေရဲ့ Quality Standard ကို သတ်မှတ်နေတာ၊ လိုင်းသီးသန့်ရှိတယ်။ ပစ္စည်းတွေကို တစ်ခုချင်း အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ Quality Assurance ရနိုင်အောင်လို့ Quality Inspection ကို ငှားပြီးတော့ Chemical test တွေ၊ Physical test တွေ လုပ်ရတယ်။ Commercial inspection လို့ ခေါ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက သူ့နိုင်ငံရဲ့လူထုကို Protect လုပ်ဖို့ သူ့နိုင်ငံရဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ မကောင်းတဲ့ပစ္စည်း မရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံတွေမှာ Inspection Authority ရှိနေတယ်။ အထူးသဖြင့် ဂျပန်ဆိုလို့ရှိရင် သူ့နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေ မထိခိုက်ဖို့ Protect လုပ်ထားတယ်။ ဂျပန်ဆိုရင် ဆန်သွင်းဖို့ဆိုရင် စစ်ဆေးတာ အရမ်းများတယ်။ စစ်ဆေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတောင် မရှိဘူး။ ကမ္ဘာမှာ ဆန်အကောင်းဆုံးထွက်တဲ့ နေရာမျိုးမှာတောင် ဂျပန်ကိုသွင်းဖို့ဆိုရင် တော်တော်ခက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေက မြင့်တယ်လို့ပြောရင် သူတို့က နိမ့်တယ်လို့ ပြောရင်ပြောမယ်။ အဲဒါကို Assure လုပ်ဖို့က 3rd Party တွေကိုသုံးပြီး လုပ်တာရှိတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Brand Name ကို တည်ဆောက်ပြီး အဲဒီ Brand Name မှာ Customer ရဲ့ Confidence ရှိလာအောင် လုပ်ပြီးတော့မှ Quality ကို Assurance လုပ်တဲ့နည်းတွေ ရှိတယ်။ Brand Name ဘေးကနေပြီးတော့ ISO 9001 စသဖြင့် ပြောလိုက်လို့ရှိရင် သြော်၊ ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးဟာတော့ အင်မတန်မှ စည်းစနစ်ကျကျ လုပ်တာပဲလို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ISO ဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းက ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းဟာ Quality Product ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို လူတွေက ယုံကြည်အောင်လို့ အဖွဲ့အစည်းကို Quality Mark ပေးတာ၊ ပစ္စည်းကို Quality Mark ပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာတော့ တချို့ဆို ကြော်ငြာကို လိုက်ပိတ်တာတောင်ရှိတယ်။
လူတွေက အဖွဲ့အစည်းကို ယုံကြည်စိတ်ချနေပြီဆိုရင် ဘယ်သူမှ သူ့ကို ထောက်ခံစရာ မလိုတော့ဘူး။ ဥပမာ SONY တို့၊ Panasonic တို့၊ HITACHI တို့ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ Quality Control က သိပ်ကောင်းတာ။ လူတွေကလည်း ဒီ Brand Name ဆို ပြဿနာ မရှိဘူး၊ လက်ခံကြတယ်။ သူ့ရဲ့ Brand Name ဟာ သူ့ရဲ့ ကွာလတီလိုပဲ သွားနေကြတာ။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီပစ္စည်းတွေဆိုရင် ကြားထဲကနေ အာမခံစရာ မလိုဘူး။ ထောက်ခံချက်ပေးစရာ မလိုဘူး။ သူတို့ကလည်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်မှုက အပြည့်ပဲ။ ၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပျက်ရင် ဘာမှမမေးတော့ဘဲ လျော်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပစ္စည်းပြန်လဲပေးတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး သူတို့ရဲ့ Product ကို သူတို့လည်း ယုံကြည်တယ်။ ဈေးကွက်ကလည်း ယုံကြည်တယ်။ သူတို့ရဲ့ Brand Name ကကို Quality Assurance ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းလို တချို့ Product တွေကကတော့ Brand Name က သိပ်မကြီးဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ခိုင်မာပုံကို သက်သေထူချင်တဲ့အတွက် Quality Inspection နဲ့ Assurance လုပ်လာကြတယ်။ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ကိုယ် ကောင်းတယ်လို့ လူတိုင်းက ပြောမှာပဲ။ ဒါကို သက်သေထူတဲ့အနေနဲ့ 3rd Party ကြားနေအဖွဲ့တွေကို သုံးပြီးတော့ Assurance လုပ်ကြတယ်။ ၀ယ်တဲ့လူနဲ့ ရောင်းတဲ့လူက တစ်နေရာစီ ဖြစ်နေပြီး ပစ္စည်းပို့တာကလည်း တစ်နေရာဆိုရင် နှစ်ဖက်လုံးက မမြင်ရဘူး။ ပစ္စည်းစစ်တော့လည်း တစ်ယောက်တည်းထိုင်ပြီး မစစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ၀ယ်သူနဲ့ ရောင်းသူကြားမှာ 3rd Party က Quality ကို Assurance လုပ်ဖို့ လိုလာတယ်။ Quality တင်မက ပစ္စည်းရဲ့ အလေးချိန်တို့လို တခြားအရာတွေပါ Assurance လုပ်ရတယ်။
(၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် CEO မဂ္ဂဇင်း၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးထိန်းသိမ်းသူတို့ရဲ့ စာတွေ့နဲ့ လက်တွေ့ ဆောင်းပါးမှ ပြန်လည်ထုတ်နုတ်ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
၈။ သာယာဝတီမင်း (ကုန်းဘောင်မင်း) (၁၁၉၉-၁၂၀၈)
သာယာဝတီမင်းသည် ၁၂၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် အမရပူရမြို့ကို ပြုပြင်၍ ပြောင်းရွှေ့စိုးစံလေသည်။ ထိုနှစ်တွင် ဘကြီးတော်၏သား ညောင်ရမ်းမင်း (စကြာမင်း)ကို မသင့်သောအကြံကို ကြံသည်ဟု ကွပ်မျက်လေသည်။ ဘကြီးတော်၏ မိဖုရားကြီးနှင့် မောင်တော် စလင်းမင်းသားတို့ကိုလည်း ကွပ်မျက်ပြန်လေသည်။ မင်းတစ်ပါးစိုးစံလျှင် အထက်မင်းတို့၏ စာချုပ်များကို အသိအမှတ် မပြုတတ်သဖြင့် စာချုပ်ကို ထပ်မံအတည်ပြုရန် အင်္ဂလိပ်သံတို့က ကြိုးပမ်းသော်လည်း အခွင့်မရချေ။ ၁၂၀၃ ခုနှစ်တွင် ဒဂုံသို့စုန်၍ ရွှေတိဂုံစေတီကို ပြုပြင်လေသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ယာယီနန်းစံရာ မမြကလေးလည်း လိုက်ပါလာခဲ့လေသည်။ ၁၂၀၇ ခုနှစ်တွင် ပုဂံမင်းသား၏ ကုန်းချောမှုအရ အနောက်နန်းမိဖုရား မမြကလေး ကွပ်မျက်ခံရလေသည်။ သာယာဝတီမင်းလည်း စိတ်ဖောက်ပြန်သောဝေဒနာ ခံစားရလေရာ ယင်းတောဝန်ကြီးလည်း ကွပ်မျက်လေသည်။
၉။ ပုဂံမင်း (၁၂၀၈-၁၂၁၄)
သာယာဝတီမင်း နတ်ရွာစံလျှင် သားတော် ပုဂံမင်းက ထီးနန်းဆက်ခံလေသည်။ မြို့ဝန်ဘိုင်ဆပ်နှင့် မြို့စာရေး မောင်ပိန်တို့အား မတရားမှုများ ပြုကျင့်ခဲ့သဖြင့် ၁၂၁၃ ခုနှစ်တွင် ကွပ်မျက်လေသည်။ ထိုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ဝန်သည် အင်္ဂလိပ်လူမျိုးနှစ်ဦးအား မှုခင်းအလျောက် အပြစ်စီရင်ရာတွင် ထိုသူတို့က လီဆယ်၍ အင်္ဂလိပ်အစိုးရအား တိုင်တန်းသဖြင့် အင်္ဂလိပ်တို့က အရေးဆိုလေသည်။ မြန်မာတို့က ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကိုပြောင်း၍ ရွှေတောင်မြို့ဝန်သစ် ဦးမှုန်ကို ခန့်ထားပေးသော်လည်း အင်္ဂလိပ်တို့က မြန်မာမြို့ဝန်အား ထိပါး စော်ကားရုံမက မြန်မာပိုင် ရေနန်းယာဉ်သာသင်္ဘောကို လုယူပြေးခြင်းဖြင့် စစ်ဖြစ်အောင် ရန်စလေသည်။ ထို့နောက် အခွင့်အရေး တောင်းဆိုသောစာကို ပေးပြန်လေသည်။ မြန်မာတို့က တတ်နိုင်သမျှ လိုက်လျောပြန်သော် ထပ်မံ၍ စစ်စရိတ်ငွေ တစ်သန်းကို ထပ်မံတောင်းဆိုပြန်သဖြင့် မြန်မာမင်းသည် မလွှဲမရှောင်သာတော့ဘဲ အင်္ဂလိပ်တို့နှင့် ဒုတိယအကြိမ် စစ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရပြန်လေတော့သည်။
၁၂၁၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် တိုက်ခိုက်ရာ အရေးနိမ့်၍ ပြည်နှင့် မြေထဲမြို့အထိ ဆုတ်ခွါရလေသည်။ မြန်မာနေပြည်တော်တွင် မင်းညီမင်းသားတို့၏ အရေးကလည်း တစ်မှောင့်ဖြစ်နေလေရာ ၁၂၁၄ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၁၁ ရက်နေ့တွင် အောက်မြန်မာနိုင်ငံ ပဲခူးနယ်ကို အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းယူကြောင်း ကြေညာလေသည်။ ဘကြီးတော်၏ညီတော် မင်းတုန်းမင်းနှင့် ကနောင်မင်းသားတို့မှာ ရာဇ၀တ်အပြစ်သင့်သူများကို ထိမ်ဝှက်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ အပြစ်သင့်ရောက်မည်ရှိစဉ် ရွှေဘိုသို့ ထွက်သွားကာ အင်အားစုပြီးနောက် အမရပူရနေပြည်တော်ကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လေသည်။ အင်္ဂလိပ်နှင့် တိုက်ခိုက်သော တပ်များကိုလည်း ပြန်၍ခေါ်ရလေတော့သည်။
Posted by Ko Nyan Posted Time 9:38 AM0Comment(s) Link This
El Nino သမုဒ္ဒရာ ရေစီးကြောင်း
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ စက်တပ်လှေ၊ သင်္ဘော၊ ခေတ်မီငါးဖမ်းကိရိယာတွေ မရှိသေးတဲ့အချိန်က ပီရူးတံငါသည်တွေဟာ ကမ်းနီးရေတိမ်ပိုင်းမှာ သမားရိုးကျ ပိုက်ကွန်ကလေးများနဲ့ ငါးဖမ်းကြရပါတယ်။ လေးငါးနှစ်တစ်ကြိမ်လောက် ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာ ရေပူစီးကြောင်းတစ်ခုဟာ မြောက်ဘက်က တောင်ဘက်ကို စီးဆင်းလာတာကို သူတို့တစ်တွေ သတိထားမိတာနဲ့အမျှ ငါးတွေကိုလည်း ခါတိုင်းနှစ်တွေနဲ့မတူ အမြောက်အမြား ဖမ်းလို့ရတယ်။ ကောက်ယူလို့မနိုင်လောက်အောင် ငါးသေတွေ မသေမရှင်တွေ ကမ်းခြေမှာ ဖွေးဖွေးလှုပ်နေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ရေစီးကြောင်းဟာ သူတို့ကို ဘုရားမ,သလို မ,တာပဲလို့ ယူဆကြတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ် စတင်တဲ့အချိန်ကလည်း ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နောက်ပိုင်း ၀န်းကျင်ဖြစ်နေတော့ အဲဒီရေစီးကြောင်းကို သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ (ပီရူးနိုင်ငံဟာ စပိန်စကားပြောနိုင်ငံတစ်ခုပဲ) the Child လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ El Nino လို့ ခေါ်လိုက်ကြတော့တာပေါ့။
ကမ်းနီးရေတိမ်သာမက ကမ်းဝေးရေနက်ပိုင်းမှာပါ ခေတ်မီငါးဖမ်သင်္ဘောတွေနဲ့ ငါးဖမ်းယူနေတဲ့ ပီရူးငါးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အဖို့ကျတော့ ရှေးက တံငါသည်တွေရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ပြောင်းပြန် ဖြစ်သွားတယ်။ သာမန်ရိုးရိုးနှစ်တွေမှာ ငါးတန်ချိန်ပေါင်းများစွာ ဖမ်းမိကြပေမယ့် El Nino လာတဲ့နှစ်မှာ ငါးပုံတစ်ပုံတောင် မရကြတော့ဘူး။
ပီရူးဘက်ကမ်း ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှာ Humbolt ရေစီးကြောင်းဟာ တောင်ကနေ မြောက်ကို စီးဆင်းပါတယ်။ အအေးပိုင်းက စတင်စီးဆင်းလို့ ရေဟာ အေးမြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပီရူးဘက်ကမ်းမှာ Upwelling (အထက်ရေလှန်ပြီး အောက်ရေ တက်လာတဲ့) သဘာဝဖြစ်စဉ်ကလည်း ရှိလေတော့ ရေဟာ အမြဲအေးမြတဲ့အတွက် ငါးစာဖြစ်တဲ့ ရေမှော်ပင်အမျိုးမျိုး ရှင်သန် တိုးပွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငါးတွေဟာ ကမ်းနီးကမ်းဝေး ရေတိမ်ရေနက်မှာ ဧရာမအုပ်ကြီးတွေအဖြစ် ရှင်သန်ပေါက်ဖွား နေထိုင်ကြပါတယ်။ ငါးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း အမြောက်အမြား ဖမ်းလို့ရလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တချို့နှစ်တွေမှာ မြောက်ပိုင်းအပူပိုင်းကနေ ပူနွေးတဲ့ ရေစီးကြောင်း အယ်လ်နီးညိုဟာ တောင်ဘက်ကို စီးဆင်းလာတော့ Humbolt ရေစီးကြောင်းဟာလည်း တောင်ဘက်ကို ဆုတ်သွားပါတယ်။ (ကမ္ဘာကြီး တောင်ဘက်သို့ ခေတ္တစောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ် Southern Oscillation ကြောင့်လို့ ပညာရှင်အချို့ ယူဆကြတယ်) ငါးစာရေမှော်ပင်တွေလည်းသေ၊ ငါးတွလည်း ရေပူချိန်တိုးလာတာနဲ့အမျှ မနေနိုင်၊ တခြားဒေသတွေကို အုပ်လိုက် မျိုးစုလိုက် ပြောင်းကုန်ကြတော့ ပီရူးငါးလုပ်ငန်းဟာ ရုတ်ချည်း ကျသွားရပါတယ်။ ပြောင်းဖို့အချိန်မရလိုက်တဲ့ ငါးတွေ၊ ငါးစာရှားသွားလို့ သေကြေတဲ့ ငါးတွေလောက်သာ ကျန်ခဲ့တော့ တံငါသည်တွေလောက်ပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ဖမ်းမိကြပါတော့တယ်။ ငါးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအဖို့တော့ ငါးအုပ်ကြီးတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်လို့ ငါးဖမ်းရခက်သွားတတ်ပါတယ်။
Humbolt နဲ့ El Nino ရေစီးကြောင်းအကြောင်းကို ဆရာဗိုလ်အေးမောင်က "သမုဒ်အဏ္ဏ၀ါပြင်" စာအုပ်မှာ နည်းနည်းရေးထားပါတယ်။ El Nino ကိုတော့ အင်နင်နို ရေစီးကြောင်းလို့ပဲ သုံးပါတယ်။ သိပ္ပံစာရေးဆရာတစ်ဦးက သူငယ်တော်လို့ ၁၉၈၂ ခုနှစ်လောက်တုန်းက သုံးဖူးပါတယ်။ လမ်းစဉ်ပါတီထုတ် ၁၉၈၃ နိုင်ငံတကာရေးရာ ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာတော့ ခရစ်၏သားတော်လို့ မြန်မာလိုဘာသာပြန်သုံးပြီးမှ Foot Notes မှာ အင်္ဂလိပ်ပြန်ထည့်တယ်နဲ့ တူပါတယ်။ the Christ's child ဖြစ်သွားရော။ အမှန်က စပိန်စကား El Nino ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် the Christ Child မှာ "s" မပါပါဘူး။ ကျွန်တော်သုံးဖို့ ကြုံလာရင်တော့ El Nino ကို ခရစ်တော်ကလေးလို့ပဲ သုံးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ သူ့ကောင်းမှုအဖြစ်ဆိုးတွေကို ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ ခရစ်တော်ကလေးလို့ သုံးရမှာ မဆီလျော်ပြန်ဘူး။
ဒါကြောင့် သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းကို El Nino လို့ ခေါ်မယ့်အစား တခြားနာမည်ပေးဖို့တောင် ကောင်းနေပါပြီ။
အငြိမ်းစား မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒအရာရှိ
(ဂျူး ၏ ကျွန်မချစ်သောနိုင်ငံ စာအုပ်မှ ပြန်လည်ထုတ်နုတ်ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
သေဒဏ် ကျခံထားရသော အကျဉ်းသားအား ကြိုးဆွဲချသတ်မည့်နေ့တွင် အပျံစား နံနက်စာကျွေးသည်။ ကော်ဖီခွက်ကို ကမ်းမပေးမီ ထောင်ဝန်ထမ်းက မေးသည်။
"သကြား ဘယ်နှဇွန်း ထည့်မလဲ"
"ခင်ဗျားရူးနေသလား၊ ကျွန်တော့်မှာ ဆီးချိုရောဂါ ရှိတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားသိသားနဲ့"
ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်နှင့် ရုရှားတို့ စကားပြောနေကြသည်။
"ကျွန်တော် အိပ်ခန်းထဲမှာ လျှို့ဝှက်အသံဖမ်းစက်တစ်လုံး တပ်ထားတယ်။ နယ်က ပြန်လာတဲ့အခါမှာ စက်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်မရှိတုန်း ကျွန်တော့်မိန်းမ ဘာလုပ်သလဲဆိုတာ အကုန်ပြန်သိရတယ်"
"ကျွန်တော်ကတော့ အိပ်ခန်းထဲမှာ မိန်းမသိရအောင် တီဗီကင်မရာတစ်လုံး တပ်ထားတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမဆီ ဘယ်သူလာသလဲဆိုတာတောင် ကျွန်တော် မြင်ရတယ်"
"ခင်ဗျားတို့ အလကား ပိုက်ဆံဖြုန်းတဲ့လူတွေ၊ ကျွန်တော့်နည်းက အလွယ်ဆုံး။ နယ်က ပြန်လာတဲ့အခါမှာ ဘေးခန်းက အိမ်နီးချင်းအမျိုးသမီးဆီ အရင်သွားပြီး သူ့ကိုပြောတယ်၊ "နင်ဘာဖြစ်လို့ နင့်ယောက်ျားကို သစ္စာဖောက်ရသလဲ" လို့၊ "ငါက သစ္စာဖောက်တယ်ဟုတ်လား" လို့ သူကဒေါနဲ့မောနဲ့ ပြန်ပြောပြီး "ရှင့်မိန်းမကလေ.. ရှင့်မိန်းမကလေ…" နဲ့စပြီး ကျုပ်မရှိတုန်း ကျုပ်မိန်းမ ဘာလုပ်သလဲဆိုတာ အကုန်ပြောပြတော့တာပဲဗျို့"
အိမ်က ပြဿနာ အိမ်မှာပဲထား
ကက်သလစ် စာသင်ကျောင်းတစ်ခုတွင် ဆရာမက လူအားလုံး အာဒမ်နှင့် ဧ၀တို့မှ ဆင်းသက်ကြောင်း စာသင်သားကလေးများကို ရှင်းပြနေသည်။ ချာတိတ်တစ်ယောက် လက်ညှိုးထောင်ပြီး ပြောသည်။
"ဖေဖေကပြောတယ်၊ လူအားလုံး မျောက်က ဆင်းသက်တယ်တဲ့"
"ချာတိတ်၊ မင်း မြဲမြဲမှတ်ထား၊ မင်းရဲ့အိမ်မှာ ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကို တို့ စိတ်မ၀င်စားဘူး၊ ကျောင်းကို ယူမလာနဲ့၊ နားလည်လား"
ဧည့်သည်လင်မယား ပြန်ရန် ပြင်နေကြသည်။ ပီတာ၏မိဘများ တံခါးဝအထိ လိုက်ပို့ရင်း သားကို ပြောသည်။
"သား၊ အန်ကယ်နဲ့ အန်တီတို့ ပြန်ကြတော့မယ်၊ ဘာစကားပြောရမလဲကွယ့်၊ ပြောလိုက်ပါဦး"
ပါမောက္ခဖြစ်သူ ဖခင်ကို သားက မေးသည်။
"ဖေဖေ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ ဘာလဲဟင်"
"သား… နားလည်အောင် ဖေဖေဘယ်လို ရှင်းပြရပါ့၊ ဆိုကြပါစို့ကွာ၊ ဒီနေ့ ရာသီဥတုက အခြေအနေကို တို့သိချင်တယ်။ ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ရမယ့်အစား တို့ တီဗီကို ဖွင့်လိုက်တယ်၊ အဲဒါ ယဉ်ကျေးမှုပဲ"
(မောင်ကောင်းထိုက်၏ ဟာသပဒေသာ အမှတ် ၁၁ မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်)